Indlela yokulukuhla umfazi otshatileyo, iingcebiso zempumelelo eqinisekileyo | Amadoda aQinisekileyo
Ungamhenda njani umfazi otshatileyo?
Ukulukula umfazi otshatileyo, njengommiselo ngokubanzi, ayisiyonto ilula, kodwa kukho into ethile amaqhinga kuyafuneka uyazi ukuba ufuna ukwazi ukuba ungamrhwebesha njani umntu obhinqileyo olala qho ebusuku nomntu. Ukuba udibene nelinye lala mabhinqa okanye into oyinqwenelayo kukuqhagamshela kumfazi oneringi, hlala kuba kweli nqaku uza kufunda kwaye uyazi yonke into ekufuneka uyazi.
Kwindawo yokuqala, kubalulekile ukuba siyithathele ingqalelo into yokuba umfazi otshatileyo ngumntu oneqabane kwaye ukuze simrhwebeshe kufuneka simnike into ebhetele kunaleyo anayo yonke imihla ngalo lonke ixesha ebuya ekhaya kwaye ufumana ntoni rhoqo ebusuku xa engena ebhedini.
Fumana ipeni kunye nephepha, kwaye uzilungiselele ukwenza inqaku esiqala ngalo.
1 Sisiphi isitshixo sokulukuhla umfazi otshatileyo?
1.1 Zibonise ngokwahlukileyo kwaye ujonge amanqaku abuthathaka emtshatweni wakho.
1.2 Kuhlaselo, nangona ulumkile
1.3 Yiba nomonde kwaye ungangxami
2 Uxelela njani ukuba umfazi otshatileyo uyakuthanda
2.2 Ubude bokubambisana
2.3 Umfanekiso owahlukileyo
2.4 Kwenzeka ntoni ukuba uthatha inyathelo lokuqala?
3 Yintoni onokuyithetha kumfazi otshatileyo ukuze umoyise
4 Ingcebiso yethu; yonwabele, wonwabe kwaye ufunde ukubaleka
Sisiphi isitshixo sokulukuhla umfazi otshatileyo?
Isitshixo esiphambili sokulukuhla umfazi otshatileyo esele simnikile kwintshayelelo yeli nqaku kwaye yile amaxesha amaninzi abantu basetyhini batsaleleka kwinto ephucula ngandlela thile le sele benayo. Banokujonga umntu onomzimba ongcono, obenza bahleke yonke imihla okanye obamameleyo kwaye sele kwaziwa ukuba umtshato uphela ucima yonke into ukuba awuzikhathalelanga yonke imihla ngononophelo olukhulu.
💡Ubungakanani bepenis yakho Ngaba sisithintelo xa kufikelelwa koyise umntu wasetyhini? Emva koko sikucebisa khuphela incwadi yePenis Master apha Ukuze ufumane obona buchule yandisa ubungakanani bakho ngokukhuselekileyo.
Olu luvo lwethu sisitshixo, nangona zininzi ezinye izinto, zikwabaluleke kakhulu ekufuneka uzithathele ingqalelo xa uzama ukulukuhla umfazi otshatileyo.
Ingcebiso, zama ukuzibonakalisa uhlukile, kodwa ungahlukanga kwaphela. Ukuba uzama ukurhwebesha umfazi otshatileyo wenza into eyonyanyekayo kwaye unxibe umzekelo ngento oyithengileyo kwiminyaka eyadlulayo, uqala kakubi kakhulu, nokuba ungazibonakalisa njani njengomntu owahlukileyo. Abafazi abatshatileyo bafuna into eyahlukileyo, kodwa hayi into eyahlukileyo eyenza umyeni wabo abe mbi ngakumbi.
Zibonise ngokwahlukileyo kwaye ujonge amanqaku abuthathaka emtshatweni wakho.
Ukuba umfazi otshatileyo unomdla kuwe, nokuba utshatile okanye awutshatanga, kufuneka uzibonakalise ngokwahlukileyo, nangona ungayeki ukuba nguwe. Ukuzibeka njengomntu ongeyiyo kuya kukunceda iintsuku ezimbalwa, kodwa ekuhambeni kwexesha iya kuba yinto engalunganga kuwe kwaye iyakhathaza kakhulu kuye oya kushiya ecinga ukuba emva kwayo yonke indoda yakhe yile ndlela ayiyo kwaye amaxesha ngamaxesha Ude umthande kakhulu okwexeshana.
Enye into ebalulekileyo kukuba ufumanise amanqaku abuthathaka emtshatweni womfazi ojonge ukulukuhla. Ukuhlalutya imeko, xa umfazi okanye indoda ifuna ukuba nobudlelwane ngaphandle komtshato, kungenxa yokuba kwenzeka into ethile okanye ayihambi kakuhle. Kusenokwenzeka ukuba ujonge into eyahlukileyo okanye uphile iimvakalelo ezintsha, kodwa kwimeko enjalo, yonke into iya kuba lula kwaye ibe lula kwaye ndingade ndibenobuganga bokuthi ungayeka ukuyifunda.
Ukwazi indlela yokudlala amakhadi akho kuya kufuneka uyazi ukuba ngawaphi na la manqaku abuthathaka. Kungenzeka ukuba izinto ezincinci ziyasilela okanye yonke into isilele ngokubanzi, eya kuba ziindaba ezimnandi kakhulu kuwe kuba kuya kuba lula kakhulu kuwe ukuba umhende.
Ewe uyigcine engqondweni xa ufumanisa ubuthathaka bomtshato wakho ukuba kufuneka ubenze ngendlela efihlakeleyo nefihlakeleyo. Ukuba ujonga into engaphandle komtshato wakho, awuyithandi kakhulu kwaye ke ngekhe uthande ukuthetha ngayo kakhulu ixesha elide.
Kuhlaselo, nangona ulumkile
Nje ukuba ubazi ubuthathaka bomfazi onomdla kuye, uzibonakalisile ngokwahlukileyo kwaye uqinisekile ukuba elinye iqela liyalamkela kwaye linomdla kuwe, lifikile ixesha lokuba kuhlaselwe.
Kubalulekile kweli nyathelo ukuba ulithathe ngokuzolileyo nangononophelo kuba akufuneki silibale ukuba sizama ukurhwebesha umfazi otshatileyo othe kwiimeko ezininzi, nangona ingengabo bonke, esoyika ukungcatsha umyeni wakhe, nokuba bayathandana naye okanye akunjalo kwaye bakhetha ukukhuseleka ngaphambi kokuba banike naliphi na inyathelo okanye benze nayiphi na intshukumo.
Umbono olungileyo usenokuba Mmeme esidlweni okanye asele kwaye uzazise. Ewe ulumke apho umsa khona kuba awusoze ulibale ukuba uneqabane lakhe kwaye angakubamba kwelona xesha lilindelekileyo. Ukuba umyeni osemsebenzini ukubamba usitya kunye nomfazi wakhe, zinikezele ekufeni kwaye ngaphezulu kwako konke ulibaleke kuba umfazi otshatileyo uyakukhanyela yonke into kwaye ukuze angalahli oko anako, ngekhe akufowunele okanye ahlale nawe.
Yiba nomonde kwaye ungangxami
Ukuqhubeka nokuhlaselwa akuthethi ukuba ngomso uthando lwakho olutsha liza kwahlukana nomyeni wakho, lishiya yonke into ngasemva, ukuba nihambe nani niyokuphila ubomi obutsha. Ubudlelwane kufuneka buqhubele phambili kancinci kancinci kwaye budibanise Kwaye ngelishwa lakho, ukhetha ukugcina ubudlelwane bobabini buphila, ke kuya kufuneka uyazi ukuba unganyamezela njani.
Ngethamsanqa, isigqibo sokuqhubeka ecaleni kwakhe wakube ukwazi ukumlukuhla kukuwe. Kwaye kuya kufuneka uqaphele kakhulu ngawo onke amaxesha into oyifunayo kwaye ukuba yanele ukuba ulukule lo mfazi utshatileyo okanye uphile i-adventure okanye ufune enye into naye, ekufuneka ngokungathandabuzekiyo yenzeke kuba wophula ubudlelwane bakhe.
Uxelela njani ukuba umfazi otshatileyo uyakuthanda
Ngaba wakha wazibuza ukuba ezo jongo zomfazi otshatileyo ohlangana nazo ngemihla yakho zithetha enye into? Kolu hlobo lwemeko rhoqo uya kushiyeka uzibuza ukuba kukho umdla na kubo, okanye luhlobo nje lokufuna ukwazi.
Kukho amanye amanqaku aphambili Kuya kufuneka uhlalutye:
Ukudibana kwamehlo akuyonto yokugqibela, kodwa kunjalo indlela enobulumko yokuseka "ijelo lonxibelelwano" lokuqala. Ukuba unomdla wokwenene kuye, uya kukujonga rhoqo, kwanokuqhubeka nangokuqhubekayo.
Ngokwenyani, ukuba umntu obhinqileyo uyakuthanda, kufuneka nje vumela ukuba uqhutywe ngamehlo akhe, kuba uya kuba nguye oqala ukudibanisa amehlo.
El utshintshiselwano ngamehlo bubungqina. Ukuba ugcina amehlo akho engawabuyisi amehlo akhe, kukho iindlela ezilungileyo zoloyiso. Kwimeko apho bajonge kude, kuya kufuneka ulinde ukuvela kwale ndlela yokuziphatha kwiintlanganiso ezizayo.
Ngolwimi lomzimba banokukhupha imiqondiso eyakuba bubungqina obucacileyo ukuba ukuthanda kwakhe. Khawufane ucinge ukuba uhamba ngendlela evusa inkanuko, ukuze umjonge, okanye aphulula iinwele zakhe xa umjongile.
Ubungqina bokuba uyamthanda buza kubonakala ukuba izama ukusondela kuwe, ngobuqhetseba, okanye funa izikhundla zobuchule ukuqala incoko nawe.
Ukuba uyakwazi ukuthetha naye kwaye uqaphele, ekuhambeni kwencoko, ukuba uyakubonisa inkalo yakhe enokungaziwa ekuqaleniIkwaluphawu lokuba unomdla kuwe.
Kuya kufuneka uyazi ukuba umfazi otshatileyo unika umfanekiso othile kubantu abamngqongileyo, kodwa oku akuthethi ukuba ngowona mfanekiso upheleleyo. Ukuba nguwe okuthandayo, kunokwenzeka ukuba kutyhila ezinye zeempawu zobuntu bakhe ezimbalwa kakhulu ezaziyo ukuba zikhona.
Xa umfazi otshatileyo enika umbono wokuba wonwabile, ngaphandle kwento esinokuthi "yindawo yakhe yokuthuthuzela", bubungqina bokuba uyakuthanda. Phakathi kwezinye izinto, kuba unakho ukumenza akhanye into angafuni ukuyityhilela abanye abantu, kodwa xa unawe uziva ekhululekile.
Kwenzeka ntoni ukuba uthatha inyathelo lokuqala?
Nangona oku kungenzeki ukuba kwenzeke ngokukhawuleza (isenokungaze yenzeke), enye yezinto ezinokwenzeka ukuba umfazi otshatileyo uyakuthanda kukuba kunjalo yena othabatha inyathelo lokuqala.
Usabela njani kwezi meko? Ewe kuya kufuneka wenze kube lula kubo, zama ukwenza ukuba uxinzelelo lokuqala lunyamalale ngokukhawuleza, kwaye ukwenze kucace ukuba nawe unomdla kuye. Isitshixo kukuba eli nyathelo lokuqala liphuhliswa ngokwendalo ngangokunokwenzeka.
Njengoko sibona, ukwazi ukutolika ulwimi lomfazi Kuyimfuneko ukwazi ukuba uyakuthanda na, kwaye ukusuka apho uthathe amanyathelo akhuselekileyo. Ayisiyongozi kwaphela ukuchitha ixesha lakho kwabasetyhini abangenamdla wokwenene kuwe, okanye abakujonga ngokufuna ukwazi, njl.
Yintoni onokuyithetha kumfazi otshatileyo ukuze umoyise
Ukoyisa umfazi ayisiyonto ilula. Ukuba utshatile, kunzima nangakumbi, kodwa ayinakwenzeka loo nto. Imfihlo enkulu kukuba "umkhuthaze" ukuba acingeOko kukuthi, ukucaphukisa ekucingeni kwakhe malunga nokuba ukunye nomntu afuna ukuba naye, kutheni echitha ixesha elininzi nabahlobo kunaye?
Ngawaphi amagama onokuwasebenzisa? Akunjalo, nangayiphi na imeko, ukusebenzisa amagama omlingo, kodwa kukufumanisa izinto ozithandayo kunye nezo ungazithandiyo kwinqanaba eliphezulu.
Ke Sibona imizekelo yamabinzana asebenzayo Uloyiso lomfazi otshatileyo:
"Ndiyakuthanda kuba uyintsomi, ukhethekile, wahlukile kwabanye abantu basetyhini." Kubo rhoqo bayathanda ukuziva behlukile, ngaphezulu kwabanye abafazi, ngokuthelekisa ukuthetha.
“Awufani nabanye… unento endingayaziyo ukuba yintoni, into engachazekiyo ephazamisayo, lonto indenza ndithandane ”. Ngokuhambelana nemigca efanayo nale ingasentla.
"Xa sisondele, undiphakamisela kwelinye ilizwe, ilizwe ekukho wena kunye nam kuphela." Ngeli binzana sele udlulile waya kwisigaba ngqo, apho ukhoyo ukuveza imeko apho sele nikunye kwenye indawo.
"Ngenxa yobuhle bakho nje ndiza kukwazi ukuthatha amanyathelo afanelekileyo." Ngaleli binzana uyiyo ukubonisa isibindi sakho kunye nobume bakho ukuzibandakanya naye. Lo mboniso wamandla uya kubaluleka kakhulu kuye; musa ukulibala ukuba ukungaqiniseki kunye noloyiko lwabo lukhulu.
"Kuwe ndingaba yindoda efanelekileyo, ungomnye wabo bafazi baxabiseke ngokwenene kwaye ndingenza nantoni na." Ukuqhubeka nomgca wesivakalisi esedlule, malunga Lususe uloyiko kuye kwaye umenze abe nokukhuseleka kwiinjongo zakho. Ukudana okungathethekiyo kuye kunokuba kukuba "uloyiko lwenqanaba" lunokwenza ukuba ushiye inkampani ngomzuzu wokugqibela.
Ingcebiso yethu; yonwabele, wonwabe kwaye ufunde ukubaleka
Umntu ngamnye wahlukile, kodwa ingcebiso yethu yahlukile ukuba wonwabele lonke ulwalamano, nditsho naleyo onokuba nayo nomfazi otshatileyo kwaye wonwabe ungakhange ucinge kakhulu. Ukuba ucinga kakhulu kuyo yonke into ungagcina uphambene kwaye uphele ungakonwabeli impumelelo yakho kunye nalo mfazi ubalaseleyo oye wakwazi ukulukuhla.
Kukwabalulekile ukuba ufunde ukubaleka, akukhathaleki nokuba uthandana njani okanye ungumfazi onjani, kwaye xa izinto zibheda kufuneka uqhubele phambili ngokungcono. Ukuba umfazi omrhwebeshileyo ubenza nzima ubomi bakho kunokuba kukwenze wonwabe, umyeni wakhe uhlala ekhona kwaye kuya kufuneka uhlale ekufihleni ngokusisigxina, funda ukubaleka, uya kuzenzela okuhle kakhulu.
Ukulungele ukurhwebesha umfazi otshatileyo kwaye ungasileli kwilinge lakhe? Ukuba ubufuna ukwazi ngakumbi ukuze uphumelele, ungaphuthelwa zeziphi amanqaku abuthathaka obhinqileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Amadoda aQinisekileyo » yokuPhila » Ukuzonwabisa » Ungamhenda njani umfazi otshatileyo?
Izimvo ezi-219, shiya ezakho
Ndiyakholelwa ekubeni oku akusebenzi nje ukoyisa umfazi otshatileyo kuphela kodwa nokugcina onayo endlwini yakho ... Kubonakala ngathi licebo elilungileyo kum.
leliphi icebiso elilungileyo, abonwabileyo baluncedo kakhulu
Ewe bendinomfazi otshatileyo kodwa kwahlala iintsuku ezi-5 kuba yayiyingxoxo kuphela xa sasizobona umyeni efunda yonke imiyalezo ukuba ikaka iyinyani uneminyaka engama-24 ubudala kwaye ndingu-16 mdala noko kum yinyani kwaye iyandenza ndithandane
Ukuba awuyithandi ke chingassss aaa yakho puuuta madreeee asshole kwaye ndifuna uyazi ukuba ndiyifakile ipuuuta maderreee yakho
ajjajajajjajajajajajaj yintoni ithamsanqa
UCarlos Marroquin sitsho
Inqaku elilunge kakhulu, ndilithandile kakhulu, ikwayimeko eyenzeka kumadoda amaninzi kwaye asinakho ukwahlula ngexesha. Inqaku elihle kakhulu liyavuyisana
Phendula u-carlos marroquin
IFERNANDO IZIBHENO sitsho
Inyani yile, oku kuluncedo kakhulu kulo naliphi na iqela, isancho kunye nesanado, hehehehe… iyasebenza nyani, umntakwethu uyingcungcu kwaye uhlala endixelela into efana nale; Ndicinga ukuba icala eliphambili lokungena yimvakalelo.
Phendula FERNANDO IZIBHENGEZO
Molweni, ndithanda umfazi otshatileyo, unabantwana kwaye mdala kunam, uneminyaka engama-32 kwaye mna ndina-19, kunjalo, ndamxelela ukuba ndiyamthanda naye wandixelela into enye kodwa ndongeza ndathi utshatile Emva koko wandixelela: Ndiyakuthanda kakhulu sithandwa sam ungalibali.
Inyani yile yokuba ndiyamthanda, ndiyamthanda kwaye andazi ukuba ndingaqinisekisa njani ukuba umqobo awuyongxaki.Ukuba ungandinceda, ndiyakuxabisa apho kwaye ndiyishiya i-imeyile yam. man_.com@hotmail.com ah le yenzeke ngo-okthoba 12, 2009 ithambo lipholile
Molo ongaziwayo, ndiyifunde nje ileta yakho yokuphelelwa lithemba, inyani kukuba ndizamile ukunxibelelana naye, nokuba kungowomnxeba, umnxeba wasendlini okanye iselfowuni, ndimkhathaze rhoqo, ukuze azi ukuba kuzobakho ntoni, kwaye nguye kuphela oza kukuxelela. nini kwaye uyichaza njani into oyifunayo, ndiyathemba ukuba umyalezo awulibalanga, ithamsanqa
Inqaku libetha isikhonkwane entloko, ndiye ndadlula kwiimeko ezifanayo kwaye ezemvakalelo ziyinyani kakhulu, umfazi, ngokungafaniyo nendoda, ushukuma ngaphezulu kwelo cala, ayithathi lukhulu ukuqonda ukusilela kwabo, kodwa eyona Into eyiyo kukuqonda ukuba emva kwayo yonke le nto kukho abantu abaya kusokola ngenxa yokuhamba kwakho, ke wena kunye naye kuya kufuneka siqiniseke ngento abayifunayo kunye nokuba bazimisele ukuya kude kangakanani. Kuyavela, kuyasebenza ... kodwa lumka, umhlaba oyingozi kakhulu.
Inyani yile yokuba yonke into ethethwa linqaku liyinyani. Elinye inqaku ekufuneka uligcinile engqondweni kukuba akusoloko kufuneka ubone ukuba yintoni engekhoyo ... kufuneka uthathe ingqalelo izinto ezicacileyo ezithandwa ngumntu wonke wasetyhini, umzekelo: Nguwuphi umfazi ongathandiyo xa ndimnika iintyatyambo? Okanye iitshokholethi? Yinto ebonakalayo ukuba ihlawula ... kwaye kakuhle. Lumka kwiimvakalelo, kodwa ungaze umhlukumeze, kungasayi kubakho ngxaki kuye.
Ndifuna ukurhwebesha unobhala osebenza kwisikolo samabanga aphakamileyo apho ndinika khona inkonzo yentlalo enemilenze ye-10 kwaye ehamba nge-40s kodwa andazi ukuba ndingalifumana njani ithuba kwaye oku kuyakundinceda enkosi PS Kubi ukuba unayo Intombi eneminyaka emi-5 ubudala kodwa andikhathali hahahahahaha neta ndifuna loo mpundu mncinci
Ndinengxaki, ndizibona ndithandana nomfazi otshatileyo, ndimbona mihla le, ndingumntu ophila, ndifuna nje ukwazi ukuba bacebisa ndithini. una 21 years mna ndina 40
oku kuluncedo kakhulu
UFreddy Hermogenes Miranda sitsho
Kulunge kakhulu, ukuyisebenzisa yeyona nto ibalaseleyo
Uhlala kweyiphi inkulungwane?
uYesu valadez sitsho
Ndicinga ukuba abafazi baneemvakalelo ngokwenene. Jonga, ndikhona okanye ndikwinkqubo yoqhawulo mtshato, kwaye ngaphandle kwale ndiphumelele nabanye abantu basetyhini, njani? ukubaphakathi kweengcinga zabo kunye neminqweno yabo nakanjani na inene AYIKHUMBULI NANINI NA le nto ukuze uphumelele ngakumbi ngayo.
Phendula kuYesu valadez
UOscar Seville sitsho
Ndizifumene ezi ngcebiso zimnandi, kuba ndikwimeko efanayo, ndiyavuyisana
Phendula kwi-oscar sevilla
UFrancisco lorin colorado sitsho
jms, ndicinga ukuba nokuba sikufikelela kangakanani ukulingana kwamadoda-nabasetyhini, iimvakalelo zabasetyhini zahluke kakhulu kwezamadoda, ke ndiyakholelwa kwaye ndiyathemba ukuba inqaku liyalungisa kwinyani, abantu basetyhini kufuneka bakhathalelwe. kakhulu kwizinto ezichaphazelekayo, njengayo yonke into.
Phendula uFrancisco lorin colorado
isini igeza sitsho
Eli licebo elilungileyo kodwa kwenzeka ntoni ukuba intombazana oyikhohlisayo iyaphikisana
Ukuphendula kwi-sex maniac
Ukugqwesa, kodwa kufuneka siyikhumbule into yokuba ukuba siyathandana yimeko enzima kakhulu.
umntwana ongenaluthando sitsho
Ndikhohlisile malunga ne-220 kwaye uninzi malunga nokuba ndineminyaka eyi-40 kwaye inyani kukuba le yeyona nto ilungileyo yokulukuhla kufana nokuncoma okuyimfihlo okuphezulu kuye nabani na obhalileyo.
Phendula umntwana ngaphandle kothando
Ndiyathemba uzakufumana umntu ofana nawe umfazi wam kunzima nokuyenga andazi ukuba mandithini
Ndikunikile inombolo yam ukuze undiphawule ukuba unamava amaninzi njengoko usitsho 3323130805
Molweni, eli nqaku liluncedo kwaye ukongeza kwisikhokelo, inyani kukuba ndiyathandana nomntu otshatileyo, ndizamile ukumnqanda ndilibale ngaye unyaka kodwa ndiyaphuma andizukuya naye amaxesha ngoku ndiphinde ndithandane, Utshatile kwaye nam ndinjalo, kodwa ngaphakathi ndiyazi ukuba andisoze ndalushiya usapho lwam .. Ndikwingxaki
inqaku likrelekrele kakhulu, likrelekrele kakhulu,
Kulungile ndicinga ukuba unyanisile, kuye kwenzeka nakum ukuba ndixhomeke kunye nabasetyhini abatshatileyo kodwa okwangoku ndinomdla kumfazi womzala womfazi wam okoko ndadibana naye ndinomdla kuye kodwa yile ingxaki ukuba ndiqala ukumrhwebesha, ndiza kuxelela umyeni wakhe kunye nenkosikazi yam, ndicela undinike i-orientation kuba ndifuna kakhulu ukuba nobusuku kunye naye.
Inqaku elilungileyo, kodwa liqheleke kakhulu, wonke umntu unendlela yakhe yokufikelela emfazini, amagama abo, ithoni yelizwi, indlela omi ngayo, iimpahla, indlela yokuphila, ubukrelekrele, iinkcukacha kunye nomntu ngamnye wasetyhini lihlabathi inxenye ... zininzi iinkcukacha ekuza kuxoxwa ngazo, ndingacebisa ukuba zixelelwe ngokweenkcukacha kwaye ngaphandle koloyiko njengoko yayilendlela uhlobo oluthile lomfazi oloyiswa ngayo, kuba ngamanye amaxesha umntu ucinga ukuba woyisile umfazi otshatileyo kodwa into esingayaziyo kukuba ndiya koyisa kuqala, enye indlela yokuqonda kwabasetyhini esingayiqondiyo kwaye esingenayo, asikuboni ukuvuka kwakhe kobundlongondlongo kwaye iyasoyisa singazi nokwazi, umxholo ubanzi kakhulu .. Abaninzi bathi ndinabafazi abaninzi kodwa sifuna inkcukacha kulowo nalowo kubo kwaye sikwazi ukufikelela kwizigqibo malunga nokuba, phi, iimeko, kutheni ukuba loo mfazi avumele ukuba boyiswe, sonke sifuna ukufunda kwaye siphumelele abasetyhini, ndiyathemba ukufunda ibali eliyinyani elungileyo. ithamsanqa kuwo wonke umntu
luis javier nunez sitsho
Ndithandana nomakazi wezopolitiko otshatileyo endichitha ndicinga ngaye
kodwa andazi ukuba ndithini, ndiyayithanda kakhulu, andinakuyithatha kwakhona
andizukude, nceda, ukuba ungandinceda
I-selos agradeseria xfa
Phendula luis javier nuñez
ngokugqwesileyo nceda undithumelele ezinye iingcebiso ndifuna ukoyisa umfazi otshatileyo ondithandayo Ndifuna ukumbeka ebhedini ndimenze azive ekhethekileyo
UJose Reyes sitsho
Ewe awuthethi kakhulu kodwa indoda nganye kufuneka iseke eyayo indlela
1 be wise 2 trust her 3 baxelele ukuba baphume ngendlela emsulwa 4 bambambe izandla xa ephendula kuzothathwa nje
Ndiyavuyisana nani nonke, kodwa ndifuna ukunibuza naziphi na iingcebiso malunga neeveki ezi-2 ezidlulileyo ndaziva nditsala umntu endisebenza naye kodwa utshatile, umfazi ongenambulelo oneengxaki nomyeni wakhe wandixelela ukuba uneminyaka engama-23. Umzimba mhle kwaye usebenza nzima inkcukacha ndingu 33 njengam, ngaphandle uhamba ngathi uthanda umntu amaziyo ndincede ndimfumane nceda enkosi kwangaphambili
Obu buchule bokulandela ngokombono wam. Kukulungiselela rhoqo ukulukuhla, kusasazwa ngeendlela zokwenza izinto ngalo lonke ixesha, umfazi uyazi ngaphambi kokuba akubone ukuba uza kumonwabisa. Kwaye ukuba kufanelekile ukukwazi kuba wahlukile kwaye ukongeza ukuziva uqinisekile ngesikhundla sakho njengendoda ngawo onke amaxesha. . Qho xa umbona, mjonge ngomnqweno, ukujonga kwakho kuhamba umzimba wonke kwaye uyeke ngaphandle kokukhubeka naphakathi kwemilenze yakhe kangangoko ufuna, ngumyalezo omxakayo, kwaye uya kuzixelela ukuba lo ufuna ndise ebhedini ngaphandle kokuphazanyiswa. Mncome kangangoko unako. Mnike iroses kwaye umxelele ukuba mhle ngakumbi. Awudingi ukuthambisa iziqholo kuba ivumba lolusu lolona lukhulu
Iphunga liyakhupha, kwaye ndiqala ukungcangcazela xa ndikunye nawe. . mxelele ukuba ndingathanda ukuba umntu enawe abone ukuba yiyo yonke into ekufaneleyo. Xa unethuba, mange isandla sakhe ukuze eve amandla okuphululwa kwakho ngomlomo wakho.Ungaze uyeke ukujonga amehlo akhe akubona kuwe ukuba uyindoda yakhe kuba ekujongeni kwakho bavingca umhlaba weminqweno, kwaye ukuba uyakubuza ukuba kutheni umjonge ngoluhlobo mxelele ukuba akunakwenzeka ukuba ungayenzi kwaye uyambulela UTHIXO NGOKUBA NAMATHUBA OKHO OKUQHELEKILEYO NOKUBA NOMDLALO WOKUKWAZI UKUYIBONISA NGAPHANDLE KWEINYE Ndiyathemba ukuba izokunceda wena, kodwa kufuneka ndikulumkise ukuba awuyifumani, intu yowesifazane iyayibona
Kulungile kuba ngaphandle kokulukuhla umfazi osele etshatile singakwazi ukugcina ubudlelwane bethu ngokubona iintombi zethu nazo zitshatile, ukuze ekugqibeleni sibone ukuba siyasilela kwaye simnike oko akufunayo kwaye sisodwa kuphela engqondweni yakhe .. Nangona oko kunzima kakhulu… kwaye ke abahluthi ukwangana kuthi hehe!
Ndiyathandana nomntu endiphangela naye ohlala nomlenze iminyaka emi-5, besele siphumile sabe siphethe iwayini emva koko ibhiya yafumana isiyezi wandixelela ngobomi bakhe obabunobunzima ekuzinikeleni kwakhe kokuqala kunye nomyeni wakhe wangaphambili kwaye wenza abantwana aba-2 emva koko waqala ukukhala kunye nokuthuthuzela emva koko saqala ukuncamisana kodwa inkathazo kukuba sasikwirestyu yokutyela; Siphume apho ndabe ndifuna ukumsa ehostele kodwa wandixelela ukuba kufuneka afike kowabo kuba udadewabo ebemlindile, siye sayokhwela itaxi sayombeka kwakhe. Ngosuku olulandelayo ndathetha naye ndamxelela ukuba makagcine imfihlo wandixelela ukuba kuzobanjalo. Ndimmemile ukuba aphume ngeentsuku ezi-4 eyokuphunga ikofu okanye atye kwaye wandixelela ukuba uza kubona ngemini. Ndifuna undincede ndenze njani ukuze ndiyenze eyam.
Imbongi, iMad Half kunye neTroubadour sitsho
Inqaku elilunge kakhulu kwaye lisebenza kakuhle ukuba ulumkile.
njengoko uJavier olungileyo esitsho
Sukuyisebenzisa ukutshabalalisa ubudlelwane obuzinzileyo.
Ngoku ndithi ndiyayisebenzisa ukwenza umfazi wamaphupha akho onwabe.
Phendula kwiPoeta, Medio Loco Y Trouvador
Inkunzi yenkomo uJulio Cesar sitsho
Inqaku ekubhekiswa kulo libonakala lihle kakhulu kum, ndingadibanisa kuphela uluvo oluthile kwaye ndiyazi ukuba kudlalwa njani ngokungabikho; Oko kukuthi, ukubonelelwa kakhulu kunciphisa ixabiso, kokukhona bebona kwaye besiva, kokukhona kungafuneki ukuba umntu lowo akuqwalasele, ukurhoxa okwethutyana kuya kubenza bathethe ngakumbi ngawe Khumbula ukuba ukunqongophala kwemveliso kuyalonyusa ixabiso layo.
Phendula Toro Julio Cesar
Wooooo, ndicinga ukuba ezo zinto ziyenzeka kum, kuphela ukuba ndingumfazi, kwaye umntu ufuna ukundoyisa ngaloo ndlela, kodwa ndingumfazi otshatileyo
Kulungile mvumele u-Angelica angaphoswa lithuba lokuzama enye indawo
Injongo ayisiyongxaki yokoyisa omnye umntu, kodwa kokomoya yingcinga yakhe. Kukho intabatheko yokwenyani eyenzekayo. Ukonwaba kokulukuhla kunikwa bonke abantu kwaye okukhona uxinzelelo oluveliswa sisiqwenga sokukhohlisa, kokukhona umnqweno kunye nolonwabo lukhulu. Ukulukuza ngumbono ofihlakeleyo, sisicatshulwa sokunqoba omnye umntu, ubenze baxhomekeke kuwe, kwaye umnqweno owenzayo, kokukhona uyonwabisa. Njengakumagqabaza angaphambili, abafazi abatshatileyo bangumxholo kunye nento yokulukuhlwa. Bona njengesihloko sokulukuhla kufutshane nabo, ayingobabo kuphela abayeni babo, wonke umntu othabathekileyo ngamakhubalo abo ngowabo (ulumke ungakutolikisi oku njengokungathembeki), ingcinga nomnqweno wabathandi babo bobabo, yena yeyona nto ayinqwenelayo neengcinga zakhe, ezibangela ukuba abathandi bakhe batshintshe indlela abaziphethe ngayo amaxesha amaninzi ngokungazibandakanyi (ndidlula ngakuye aze achithe ikofu yakhe kuba isandla sakhe siyashukuma). Oku kuqheleke kakhulu phakathi kwabasebenza nabo. Qaphela umabhalana okanye umncedisi wevenkile ukuba uyinto anqwenela ukuyenza, njengoko ebonisa ubunzima xa ephethe okanye echwetheza into ethile, ingcinga yakhe iyaphazamiseka. Zininzi iindlela zokulukuhla, zonke zisemthethweni, nangona isithembiso esicacileyo sokulala ngesondo sinokuthathwa njengesona sikhohlakeleyo kwaye singacingeli. Nangona emva kwexesha elide kwaye liphumelele ukuhendwa isenzo sesondo siye sikhulule kwaye ubungqina bokuba nomtsalane omnye komnye, isenzo sesondo ngokwaso asihendi.
Oku kuthetha kakuhle ingcebiso elungileyo
Amagqabantshintshi amnandi eli nqaku linomdla kwaye enyanisweni sele ndizenzile izigqibo zam.
Ukusukela ekuqaleni kwenqaku yayiyinto etyhila kakhulu, ngesicwangciso esihle kakhulu sokumoyisa ngokwasemoyeni kodwa leliphi iqhinga abacebisa ukuba lelona lifanelekileyo lokuba xa ndimsa ebhedini yinto engalibalekiyo kuye, ndithetha ukuba andiyi Ndifuna ukuba ayitshabalalise into anayo ndifuna nje ukuzinika incasa elungileyo kakhulu, esele nomnqweno wokuphinda ...
Uyazi ndithanda umfazi omhle kakhulu, uneminyaka emalunga nama-30 ubudala kwaye unabantwana, ndineminyaka eli-18 ubudala, uyacheba iinwele eze endlini ezokufaka idayi kugogo nakumakazi, uyacheba iinwele zam kwaye Ndiyathetha naye kodwa hayi ndiyazi ukuba ndingamxelela njani ukuba ndiyamthanda kwaye ke ...
Molo, ndathandana nomntu otshatileyo, ndiyithanda kakhulu, phaya ndiziva ngathi iyandicaphukisa, okanye iyaqina xa ndikunye nabanye abahlobo, sinobuhlobo, ndifuna ukukholelwa ukuba ndinguye ayilunganga, iphosa ubuhlobo. Andizami ukumxelela indlela endivakalelwa ngayo ngaye.
Isifundo sihle kakhulu kodwa ndikwimeko apho ndithanda umfazi omdala kunam nge-14 kwaye utshatile ngenye imini wandixelela indlela endiziva ngayo ngaye kwaye ndamxelela ukuba ndiyayithanda into ayithandayo. Khange ndimkhathalele kodwa ukuba akukho nto inokwenzeka phakathi kwethu kuba utshatile kwaye andinako ukuzisola ngesazela andixelele into endiyenzayo, ndiyaqhubeka ndinyanzelisa okanye ndiyemka kuye
Ndathandana nomntu endisebenza naye kwaye utshatile kwaye nangona engandixeleli ngqo ndiyazi ukuba unomdla nangona kuyinto entle kodwa woyika kuba ulikhoboka leziyobisi kwaye unxilile ndingenza ntoni kodwa ndiyathanda yena
Ndicinga ukuba kukunganyaniseki ukudlala ngeemvakalelo zabo bobabini ngokuxhomekeke kwityala, ngamanye amaxesha ukuba bekungokonwaba kungaphela kwintlekele, ndicinga ngcono ukuba ngumfazi otshatileyo okanye indoda ngabo abamele ukuqala ubudlelwane obukuthetha umngcipheko wakho ukuba ufuna enye into ...
Luchito lopez sitsho
Kukho umfazi otshatileyo osebenza nam. Undixelele ukuba uyandithanda njengomfazi kwaye ucinga ngam kwaye woyika ukuwela umgca wobuhlobo. Kodwa ndimbiza "mhle" okanye "mhle" kwaye undixelele ukuba uyayithanda kodwa iyamenza azive eneentloni. Kuba inokuba njalo?
Ndizama ukuthatha intombazana etshatileyo ndiyaqonda ukuba ubudlelwane nomyeni wakhe abusemhle, umntu angandinika iingcebiso zokumoyisa
Thatha umfanekiso kunye neqhude lakho lilukhuni kakhulu, bhala ngasemva ukuba uza kugoba ezine njenge-bitch kwaye uya kuthandana, beka ifoto kwimvulophu kwaye uyinike yena buqu, kunye nombala obomvu kunye negama »ndiyakuthanda» lithambe kakhulu endlebeni yakhe, kwaye ndimbuza ukuba abe nekofu okanye isidlo sasemini; Ngokukhawuleza uhamba ngoncumo kwaye xa uphuma emsebenzini yeyakho, ndiyakuqinisekisa ukuba uyamtyisa okumnandi kakhulu ngomhla wedibano, kodwa ke kuya kufuneka unyamezele phakathi kothuli nothuli incoko aza kuyenza. Ukukhupha malunga nobomi bakhe obungonwabisiyo kummelwane wendoda yakhe, khona apho kufuneka umamele, kwaye uhlala umnika isizathu kwaye ube negalelo ngezimvo ezinobundlobongela ngokuchasene nomyeni wakhe osele eyinkukhu, uhlala unika uluvo lwakho, ungaze ucebise; Ngelixa umphulaphuleyo kuya kufuneka uzame ukumfudumeza kwakhona, endlebeni kwaye uthe cwaka, ngelixa uncamisa isikhumba sakhe njengomntwana, umsebezela ukuba uziva ulungile naye, ukuba umyeni wakhe akanambulelo ngokungamxabisi ngokwaneleyo, unethamsanqa lokuba unayo ezingalweni zakho, ect, ect., Apho uyayeka ukukuxelela ngobomi bakhe kwaye afudumise intloko yakho, kwaye uya kuzinikezela kukuncamisa kwaye atyebe iqhude lakho, lixesha lokuba ukuba akutyise ngendlela abangazange bayenze ebomini bakho, ngoku ungazisiki ngakumbi kwaye uyikhuphe indoda yakho yenkanuko, umncancise ngokungabinangqondo, faka iqhude lakho emlonyeni wakhe umxelele ukuba akujonge emehlweni ukuze akwazi jonga ukuba wonwabele njani, kuya kufuneka umgeze ngamathuba okothuka kunye nobumnandi, uthambe kwaye ukhawuleze, athandane kwaye abe noloyiko, umenze onwabe njengondindwa, umbeke kane aze abethe iimpundu zakhe, i-cavalgala njengehashe, uyamtsala ngeenwele kwaye ujonge imilebe yakhe, uthetha izinto ezigwenxa endlebeni yakhe, ekugqibeleni xaval, ndiyakubona uyinto encinci xa unayo, kodwa ungalibali nanye into, ukuba uyayifumana uyakuba ne-org Asichazeki, kodwa iingxaki nazo ziya kuqala, zixabise xaval kwaye ungangeni kwiihempe zeentonga ezilishumi elinanye, andikuboni ulunge kakhulu ukujongana nalo mfazi, ulumke.
Phendula abantu abashushu
Molo, igama lam ndinguDavid kwaye ndiyayithanda intombazana etshatileyo, sincokola kakhulu kwaye siyonwaba, kodwa andazi ukuba ndingamxelela njani ukuba ndiyamthanda kakhulu, ndiyazi ukuba naye uyandithanda, utshilo umhlobo wakhe mna, okwangumhlobo wam, kodwa woyika kancinci ukutya ingqumbo kunye nam kodwa ndiyayithanda kwaye ndifuna ukuyinqoba ndiyathemba ukuba undinika ingcebiso nge-imeyile yam Ngaphezulu_27_07@hotmail.com
iqhinga elilunge kakhulu, lokoyisa kodwa ndisuka kuye bendimthanda kakhulu ,,,,,,,,,,,,
Ndinengxaki efanayo. Ndiyaphambana ngumfazi otshatileyo. Kwaye ungumfazi onomtsalane kwaye mhle kangangokuba ngamanye amaxesha kunzima ukuba ndibucinge bonke ubuhle bakhe. Usebenza nam kwaye ndimazi phantse iminyaka esi-8. Uyayazi indlela endiziva ngayo kuba xa kanye ndithethile naye kakuhle, undixelele ukuba uzakuqhubeka nokundithanda nokundijonga ngaphezu kwayo yonke enye into kwaye uyayithanda indoda yakhe…. yilento bendilindele ukuba andixelele yona. Inqaku lam lelokuba ngaphandle kwale nto, kule minyaka idlulileyo siye sahlakulela olu lwalamano lukhethekileyo phakathi kwethu sobabini (nangona kungekho namnye kuthi olwamkelayo) ... kwaoko kwaye ndiye ndaphinda ndamphindezela ngendlela efanayo, ndiyinto yokuziqhelanisa naye kwaye uyandithanda, ukuba ndimbona enendoda yakhe okanye iintombi zakhe uhlala enomdla kwaye kamva uye andibambe ngesandla okanye andange. Kucacile ukuba ndisamthanda… kwaye ngamanye amaxesha ndiyamkholelwa naye…. Ndiyamthanda kakhulu kangangokuba angabinakho ukwenza into eyonakalisa usapho okanye umtshato wakhe kodwa ukuba undinike isikhokelo sokwenza into andizukucinga kabini kuba akukho nto ndiyifunayo ngaphandle kokumanga kunye yenza uthando kuye.
Ndihlala endlini kamamazala kwaye umlamu unendlu eyahlukileyo enonyana kunye nomfazi onomtsalane onokumthanda ubusuku bonke kodwa yandenza ndaphambana kwaye andabinobuganga bokumxelela into a ezilikhulu kakhulu kodwa mna ndingathanda ukulala ngesondo kunye nothando oluncinci, akukho nto ...
Ewe kuyenzeka kum ukuba ndiyamthanda umfazi womyeni wam kwaye andazi ukuba ndingamoyisa njani, bendizomthanda ubusuku bonke kuphela andinike uthando oluncinci ndimange ukusuka entloko kuye incam yokugqibela yeminwe yakhe.
Molo, ndinguAles kwaye ndithandana nosbari wam kwaye inyani yeyokuba xa ndiqhula naye ngamanye amaxesha siyancuma kodwa andazi ukuba yinto yesiqhelo okanye enye into, umntakwethu akaniki ukuthanda izinto azifunayo, inyani andazi ukuba ndenzeni ngcono kwaye ukuba ndiyamnkcenkceshela ukuba ndinike iingcebiso ezipholileyo x ukwazi ukuba ndingakufikelela njani… ..
edgar martines cortes sitsho
Molo, ndinguEdgar kwaye ndithandana nomfazi womfazi wam, akanamabele alungileyo.
Phendula u-edgar martines cortes
ammmm molweni, kunjani ngobomi bokuhambahamba ndiqhwalela kuba umnatha awazi ukuba kutheni bewuthanda kodwa bewenza ngaphandle komlinganiselo kwaye, aaaaaaa nangona ndiyayithanda into yokwabelana ngesondo ngomlomo ukuba bandincance ngolonwabo olukhulu
iliso labo endibathathayo eeeeeeeeeeeeee
kuba ndinayo enkulu
Iindonga ze-cesar montalvo sitsho
eyyyyyyyyyy kodwa ndiyayithanda lalo
NDITHANDA AMANINZI KAKHULU, UTSHATILE, UNEMINYAKA ELI-10, USEBENZA NAM ANDIYEKI UKUMJONGA WANDIBIZA NAM AYE AHAMBE KODWA ASHIYA NGOKUKHAWULEZA NDANDIFUNA NDIPHUME UKUZE ASIBONE SEDWA KODWA NDANDIFUNA MSEBELE NGOKUGQIBELELEYO ALA IBEDI NGOKWENZEKA UKUBA NDIYAYITHANDA KAKHULU NDINAMEHLO ATHANDAYO, NDINGUJE FE UMHLOLI APHO ASEBENZA KHONA UMSEBENZINI KUPHELA, KODWA UYANDIBONA NDISoloko NDIZIBONA KODWA YONKE INDLELA KUSUKELA KONKE. . Ndimenza njani ukuba ndimthande ndimenze owam nokuba kukanye kube kanye
Ndinengxaki ndithandana nomfazi otshatileyo, unentombi unonyaka ona1 uneminyaka engama-22 kwaye umyeni uneminyaka engama-45 ufunda ebusuku, inyani andikaze ndimxelele ukuba ndiyathanda kwaye ndithandana naye ngobuqu sele eyazi ukuba ndiyamthanda kakhulu kuba ndimthumelele iileta ezipinki, iitshokholethi kunye nezilwanyana ezifakiweyo, kwaye uyazi ukuba ndim kwaye ndimthumele ngeentsuku ezikhethekileyo njenge Usuku lomama kunye nosuku lweValentine. Inyaniso kukuba, andazi ukuba ndenzeni. Ndidibene nomyeni wakhe kwishishini kwaye ndimthanda kakhulu, wonke umntu undixelela ukuba mandimxelele buqu kodwa ndiyoyika ndifuna uncedo
Ndithandana nomhazala wam sitshatile sobabini ixesha elide besinemvakalelo kodwa khange ndiyisebenzise le nto besithandana sobabini kodwa akwenzekanga nto, umyeni wakhe ebengamonwabisi kakhulu kwaye engafuni mphathe ngokufaneleyo kwaye umfazi wam unam asabelani nganto.
saul crespo barreera sitsho
Molweni inyani kukuba ndihlala nomfazi wam kwaye ndihlala kwamazala wam uneminyaka engama-45 ubudala, mhle, akavumelani kwaye unogonyamelo kwaye ukhululeke kakhulu.
Unabantwana abathathu kwaye umyeni wenza into encinci endlini, uyolala kuphela. Wamguqula kodwa wamxolela… kodwa bayaphuma nabahlobo bakhe bamtsalele umnxeba kwiselfowuni kodwa uthi akukho nto ayenzileyo ayenzileyo… kwaye inyani kukuba ndinomona….
Unenwele kwaye unabahlobo bakhe ...
Kodwa ngamanye amaxesha kubonakala ngathi uyandithanda, kodwa andinabuganga bokumxelela ukuba ndiyamthanda kuba akazi ukuba uzophendula athini okanye ngequbuliso uxelela intombi yakhe ukuba iziva inomona ngunina ... Ngenye imini ndammemela ngaphandle ukuba sizothetha kwaye sithathe i-cerbesas wathi ewe kodwa kamva ndamtsalela umnxeba kutheni kungenjalo u-benia wandiphendula kwaye ngequbuliso intombi yakhe yathatha iselfowuni yandenza ingxaki kodwa yenzeka .. Ndamxelela ngokwenzekileyo wathi hayi Avia kon kien ukushiya abantwana bakhe ... kulungile besele kudlulile ... kodwa ukusukela ngoku andinantandabuzo ke andiphindi ndiyichukumise le nto .. ndichitha kancinci ixesha ndimthumelela umyalezo ebuza malunga nentombi yam kwaye undiphendula kakuhle, kodwa ndiyakuxelela, ungayixeleli intombi yakho kuba inomona kakhulu, kodwa ngamanye amaxesha iyamsinda ndicinga ...
Emva koko ndimthumelele umyalezo ndimbulela ngokuba uyiphathe kakuhle intombi yam ndamxelela ukuba ndimmemele ekomer kwaye makhe sihambe kancinci kodwa akayithandi intombi yakhe kwaye akhonto ayaziyo, uthule kuba yena Intombi ayindibanga ... unengxaki nentombi yakhe, uyavumelana nam ... andazi ukuba mandithini, uSawule, ndineminyaka engama-26 ubudala andazi nokuba ndimtsalele umnxeba ndimxelele ukuba ndiyamthanda okanye ndicela ukuphuma kuye. Kodwa ndinoloyiko lokuba uza kuyixelela intombi yakhe
Phendula Saul crespo barreera
Iicarlos rosales garcia sitsho
Molo, ndinibhalela ndisithi ndiyamthanda umfazi otshatileyo, mhle kakhulu kwaye intle kakhulu indlela atshate ngayo, ndihlala ndimbona ehamba nomyeni wakhe bebambene ngezandla kwaye ujongeka emthanda kakhulu Ndihlala ndiphupha ngaye, andikwazi ukumkhupha engqondweni yam, ndimgcina engqondweni yonke imihla, ungandinika iingcebiso zokuba ndimoyise okanye ndazi ukuba naye uyandithanda, enkosi
Phendula i-carlos rosales garcia
Umfazi unzima ngakumbi kunoko, indoda ephumelelayo kukuba iza ngexesha lokuba sesichengeni ngakumbi kubomi belo bhinqa, akukho mfazi uqhayisayo ngokuba ngumfazi olungileyo uya kukumamela, ekuphela kwendlela kukuba naye iingxaki. Sukungena kubomi bomfazi ukuze aphule into encinci okanye eninzi anayo, ukuba akuqali ukuba yinkosana enomtsalane othembisa ukuba uya kuba yiyo.
izimvo ezilungileyo kakhulu …… ..nkosi
Alex Vega sitsho
Ingcebiso intle kakhulu kwaye bendicinga ukuba ndiyazi yonke into, ndiyabathanda kakhulu, bafuna ukubeka indlela yokwenza ngayo ukuze bangathandani ...
Phendula kwi-alex vega
Inyani yile, andazi ukuba ndithini kwakhona ... ndiyamthanda lo mfazi utshatileyo ... Ndiyathanda ukumbona edlula kwaye andikwazi ukuzibamba ndibona iimpundu okanye amabele akhe ngokwenza oko. Sisikhumba somfazi kwaye andinakuba naso, andikwazi nokukuxelela indlela endiziva ngayo. Ndidinga ukulibala ngale nto (nokuba andifuni nyani) kuba ndiyazi ukuba yeyona ilungileyo kwimpilo-ntle yam. Ndingabuncama ubomi bam ndichithe ubusuku nalo mfazi…. Ngobusuku obunye nje…
Iingcali zengqondo kwi-guadalajara sitsho
Ngokoluvo lwam, unayo yonke into yokoyisa umfazi otshatileyo nongatshatanga ngolu luhlu lubalaseleyo. Ndiyayithanda indlela ulwazi olwaludityaniswe ngayo. Kukwabonakala kum ukuba ngolu luhlu ungaliphumelela kwakhona iqabane lakho kwakhona. Ngokuqinisekileyo awusileli kwezi nyaniso!
Phendula kwizazi ngengqondo eGuadalajara
molo ndicinga ukuba icebo lihle, lisebenze kakuhle kakhulu kum, ndinentombazana eneminyaka eyi-18 etshatileyo kwaye ndineminyaka engama-42, sidibene kwiinyanga ezintlanu ezidlulileyo kwaye bendicinga ukuba uyandithanda kuphela ndide ndiqonde ukuba Wathandana nam kwaye nam, sele sinenyanga nesiqingatha sobudlelwane kwaye siyonwabele kamnandi
UDanny mxli sitsho
Molo, unjani? Okokuqala, eli nqaku ligcwele izizathu! Umfazi otshatileyo oneminyaka engaphezulu kwe1 etshatile sele ehoyiwe ngumyeni wakhe !!! kwaye nayiphi na indoda nokuba ingamatye anjani, okoko ethetha kamnandi kwaye eneenkcukacha ngokuwa kwakhe kuba uyawa! Ndikwimeko enje ... ndihleli nentombazana etshatileyo, uneminyaka engama-24 kwaye utshatile ona-4.Ungumqeshwa wam kwaye ndiqale ngokumphathela isidlo sakusasa, ndimmemela ukuba azotya, ndiqale ngokuqhula wakhe, ethetha izinto ezintle kuye, ezinye iinkcukacha kwaye oko kuwa !! Ngoku uthandana kakuhle kodwa anditshatanga !!!! hehehe… .kodwa ungamhoyi umfazi wam kuba mncinci !! ithamsanqa kuwo wonke umntu !!!
Phendula udanny mxli
URuben AS sitsho
Ndineenyanga ezi-8 zokugqibela ndinomfazi omhle oneminyaka engama-40 otshatileyo onabantwana abathathu, ndineminyaka engama-3 kwaye ndohlukene nomfazi wam iminyaka esixhenxe. Ndifuna nje ukukuxelela ukuba ubudlelwane buhle kakhulu buzele ngamava amnandi, saqala ngobuhlobo obuveliswe kwinethiwekhi, kwaye nangona eyinkosikazi egcinayo ndiyakuqinisekisa ukuba inqaku elichazwe apha liyinyani ngokuqinisekileyo, unokuba Yonke into ngaphandle komoya nangokwesondo Uwele kwindlela yesiqhelo kwaye umyeni akayikuxabisa indlela axabiseke ngayo, kwaye nokuba uneepawundi ezingaphezulu ujongeka enomtsalane, enqweneleka. Ngoku, kude kube ngoku bendinyamezele, kuba besisiya kwimiboniso bhanyabhanya kuphela, ezinye iipaki kunye neeresityu zivumile ukuyenza kwakamsinya kwaye ngumcimbi weentsuku nje ezimbalwa ukudibanisa ubudlelwane bethu kweyona midlalo mihle UMonterrey. Ukumanga ku-Pretty Lady, kuya kuba yinto engalibalekiyo xa sikunye.
Emva kweli nqaku iqhinga lam lokulukuhla abafazi abatshatileyo liyomelezwa. Inxalenye enye endicebisa ngayo kukwenza igama elinokuqondwa nini nobabini
Inqaku elilungileyo !! Ndiyathemba ukuba iyandikhonza kuba ndifuna ukoyisa umfazi otshatileyo, ungummelwane wam, uneminyaka engama-35 kwaye mna ndina-23, kuphela kukho enye ingxaki encinci: ndingumfazi !! Uya kubona ukuba ndiza kuyiphumelela, emva koko ndiza kukuxelela ukuba ihambe njani went
Ndicinga ukuba ndibhidekile nomfazi endisebenza naye kwaye ngenxa yeemeko zobomi kufuneka ndibesecaleni kwakhe ndicinga ngokumenza athandane kodwa ngamanye amaxesha ndithi ayilunganga kuba ungumhlobo womfazi wam kodwa kunjalo Andazi ukuba yintoni enye endinokuyithetha uhambe kakuhle
Ndivumelana kakhulu nokubhala ngendlela yokurhwebesha umfazi otshatileyo kodwa ndiyakholelwa ngaphambi kokuba ndiqalise ukumiliselwa kufuneka niyazi indoda ukuze umntu azi ukuba ngubani inqununu ekufuneka eyihoyile. Sebenzisa kwakhona xa ususa isigaba sokuqala sokwazi omnye nomnye kwaye unika amanyathelo aKhuselweyo amthatha ngesandla ngohlobo lwe-caress kwaye xa ubulisa mncamise entanyeni kodwa uncamise amanzi ukuba uva ukuba uye wancanywa kwaye ngawo onke amaxesha uthetha naye ukuba ilizwi lakhe liyalahlekisa kwaye akayeki ukujonga amehlo nakwindlela nganye yokuvalelisa ngaphambi kokufikelela kubudlelwane obusondeleyo khankanya ibinzana uthando lwam ndiyakuthanda Ndiyathemba ukusibona kwakhona unditsalele umnxeba, xa ikhonkco lifikelelwe ukuba likwindlu yomntu, hayi ukuyilungisa kakhulu ukuba uyigcine icocekile kodwa ingalungelelananga, indawo yokuhlala yendoda engatshatanga ixesha elifutshane, ungaze ugcine ifoto yabanye abantu basetyhini bakudala inyathela ukuba kukho ifoto eyeyakho okanye eyakhe kodwa igumbi apho omnye umntu angaboniyo, kuphela kuye xa esabelana ngo Ndizinikezele ngokulula kodwa ngothando, enkosi ngokundivumela ndinike uluvo lwam alejandro soloko kulonwabisa ukuthanda ukucinga ..
Molo uCarlos, jonga abasetyhini, abanabahlobo, xa kufikwa kumnqweno nolonwabo, kwaye abajongi ubudala bendoda abafuna ukuyonwabela, ukuba imeko yabo yomtshato ayikho njani, kodwa ndingatsho ukuba amadoda atshatileyo , abafazi bayo nayiphi na inqanaba bayabafuna, Omnye ngenxa yokuba etshatile ulumke ngakumbi, omnye kuba bephila ubomi bokwabelana ngesondo ngakumbi kwaye bonwabele ngakumbi ngengqondo ephindwe kabini yokonwabela enye indoda kunye nenye kuba bayazi ukuba kwimeko enye ithatha ixesha elide ukuya ejaculate, ke qhubeka unike umntu osebenza naye ulusu kwaye wonwabe ngokuzeleyo, umshiyele uphawu lwakho ukuze asoloko eneemvakalelo ezisondeleyo kunye nememori engalibalekiyo oyenza kakuhle alejandro….
Kukhathaza kakhulu ukufunda inqaku elinje, bendithandana nomfazi otshatileyo iminyaka emi-4 kwaye sihleli kuyo yonke into, kwaye ndonwabile ngaloo nto…. kuphela ukuba ingxaki encinci nenkulu kukuba ndamthanda kwaye ndiqala ukumdinga yonke imihla ngakumbi nangakumbi, ngamanye amaxesha kubonakala ngathi akulunganga ukuba ndiqhubeke nendoda yakhe, kodwa wenzeni xa ukunye naye uzive ungoyena Indoda ethandwayo ehlabathini ... ukubulisa ... uvavanyo oluhle kakhulu.
Molo, nditshatile kwaye ndizophuma nomfana oneminyaka engama-25 ubudala, I tg 44, wandixelela ukuba wayethanda kakhulu kodwa ngenye imini wabona intombi yam wavuma ukuba uyayithanda…. Andazi ukuba mandithini, inyani kukuba wayemthanda
Molo Yoana sitsho
Ndiyazibuza ukuba uyafuna na ukwandisa isangqa sabahlobo bakho, ndicinga ukuba le nkwenkwe iyindalo kuye ukuba ayibone ngoluhlobo kuba emncinci ndingumntu ovuthiweyo ona-44 kwaye ndifuna abahlobo ukuba bathethe kuba ndivakalelwa kukuba Ukuphulukana nobomi bam ndisebenza nje kwaye andinabahlobo ngoko ke ndikunika abahlobo bam ukuba unomdla ndikushiya nge-imeyile elnortonmx kwi yahoo.com.mx
Molweni ZIHLOBO, NDIYAQHUBEKA NEMEKO EFANAYO, NDIMAZI KWIINYANGA EZI-5 ZIDLULE KANYE NGUYE UMFAZI WOMZALA WAM UNGAMA-36 KUNYE NAMI 23 INYANISO YOKUBA LONKE Elo XESHA NDINGAXELELANGA LALO, KODWA XA NDANDISEDUZE TO HER YONKE UKUBA KWAM KWAKUKHONA AMAWAKA NGEYURE, WAYENGANIKI NANTSI, NDICINGA UKUBA NDIMTHANDA NAYE KWINQAKU LOKUPHUPHA NOKUCINGA NGALO LONKE IMIHLA OKANYE UKUMThelekisa NOMNYE UMNTU WESIFAZANE OKANYE UKUBONA UBUSO BAKHE KWENYE ENYE NGOKUBA ANDINAKULIBA, XA NDISHIYA APHO AHLALA KHONA, WANDixELELA UKUBA UNGANDIKHATHALELA, EBEKE ASETYENZISE UKUBA UKUBA ANDIYI KUMVAKASHELA UZA KUZA, KODWA MNA BONKE UMNTU OXELELAYO AMXELELEYO ANDICINGI UKUBA UYANDIPHOSA, EYA KWENZEKA IINTSUKU EZIMBALWA.
UPETRU PUNK sitsho
NGOKUPHATHELELEYO !! Izimvo ezigqwesileyo, kumava am ndingakuxelela ukuba ndingugqirha, abasetyhini bayo yonke iminyaka beza eofisini yam, uninzi lwabo luneziphene ezininzi zeemvakalelo nezesondo, njl. Kunyaka ophelileyo ndatshata kwaye ndafunga ukuba andisoze ndiphinde ndiphume nomntu otshatileyo okanye ndithandane nomntu ongatshatanga naye. NANGONA NDINGAXOXI NGOMFAZI WAM, ndaye ndagqibela ngokuwa, ndikhetha abafazi abatshatileyo ngokuba nobukrelekrele kwaye njengogqirha olungileyo ndigcina zonke iimfihlo zam zobungcali. NAMHLANJE NDINIKELA UNYANGO KUMABHINQA ATSHATILEYO, NDENZA UTHANDO KWABO… ICEBISO KUMNTU WONKE: EKUCELENI, UNIKELA…. AKUKHO MFAZI, NAKHO OKWENZEKILEYO AKUVUMELANI NOBUCHULE BESICWANGCISO KOKUQALA KONKE UKUCHAZWA, KUKULAWULWA KWEGOLID ... NGONAPHAKADE
Phendula UPETROS PUNK
u-adrian hernandez martinez sitsho
Ndifuna ukudibana nenenekazi elindifundisa yonke into ebomini kwaye sabelana ngezinto zomzali
Ndandisele ndibhalile phambi kokuba ndilibale ukushiya inombolo yam yomnxeba 0445512904996 Aten. u-adrian hernandez martinez
U-ELSA BROSON sitsho
ULINDILE KAKUHLE HAHAHAHAHA
Phendula ELSA BROSON
NGUJUAN CARLOS GONZALEZ sitsho
Molweni, ninjani, nicinga ntoni ngemeko yam, ndathandana nomfazi oneminyaka engama-26 ubudala nditshatile, ndineminyaka eyi-6 ndimazi kwaye unolwazi malunga neemvakalelo zam iminyaka emi-3, sinento ethile ubudlelwane bomsebenzi, ekuhambeni kwexesha waqala ukuziva into ethile ngam, ukwatshatile iminyaka emi-3, kwezi ntsuku zokugqibela kwaqala ukucacisa kum ukuba naye uyandithanda, ngaphezu kwako konke ndiyakuqonda kwaye konke oko isenzo sokulukuhla senzeka ngexesha lokunxibelelana kwethu nomsebenzi, Ingxaki kukuba xa sele ekunye nosapho okanye engasebenzi, uziva ezisola kwaye andixelele ukuba ndihlale kude, ukuba usapho lwakhe luxabiseke kakhulu, ndiyamqonda kuba cinga ngokufanayo, kodwa nangona kunjalo andifuni ukuphulukana naye. Uxakiwe kakhulu, into yokugqibela andixelele yona yile yokuba akazazi ukuba ufuna ntoni ngoba ukuba ebefuna umyeni wakhe ngekhe andicinge, kwaye ukuba uyandithanda ebezakuba nam, phofu ... Ndiyathanda ukwazi ukuba wandithanda nyani na okanye ndimshiya yedwa, kulungile ndizamile kodwa andikwazi ,, ukubulisa
Phendula JUAN CARLOS GONZALEZ
UBILLY GUERRERO sitsho
Molo J Carlos
Kubonakala kum ukuba kufuneka umyeke athathe isigqibo kwaye ungamcinezeli ngeemvakalelo zakho.
Kucacile ukuba unefuthe ngokweemvakalelo kodwa kuninzi aza kuphulukana nako kwaye ngequbuliso akufanelekanga
Phendula u-BILLY GUERRERO
DEAR JUAN CARLOS: Sukubuza !!! Ukuba la mfazi unomdla kuwe, yiya kuye, into ebaluleke kakhulu ukuba uphawule kukuba akanasigqibo, oko kukuthi, umenze waqina, uyathandabuza phakathi kobudlelwane bakhe bangoku nawe ... kuyafuneka ukuba uhlasele kodwa nge Njengomntu olungileyo, mnike iintyatyambo kwaye umxelele ukuba uyamlahla, NGOKU NDIYA KUMKHOKA UKUBA AWE KWI-ARMS YAKHO WAKUFUMANA OKU FUMANEKILE, KHUMBULA UKUBA KWISICELO OKU KUNIKEZELA ... KHAWUPHE UZE UMNIKE IZINTO, UKUBA UKUVUMELANA KUFUNEKA UQHUBEKE UKUBA HAYI, BUYELA EMVA NGOKUBA UMFAZI AKASOZE ASEBHEDINI LAKHO (INGABE KUSONA ESONA SITHUNYA, ESONA SIQINISEKILEYO KWEHLABATHI ... SIWA NGENXA YOKUBA IYAWELA… NDIQINISEKISA NGAYO, KODWA UMTHETHO WEGOLIDI KUFANELE UBA NENGQIQO KAKHULU, NGENXA YOKUBA YONKE INGAKHULA KAKHULU UMNTU ONAMAVA AKUXELELA ... ZITHEMBELE UTHE WADLALA AMAKHADI AKHO KAKUHLE
Ngokuqinisekileyo leliphi inqaku elilungileyo kwaye loluphi uluvo oluhle, nangona liyinyani ngamanye amaxesha abantu basetyhini basinika amaphiko, mhlawumbi abayinqumli ukuba ilinganisiwe, ndikwinkqubo yokoyisa umfazi otshate nosana oluneenyanga ezi-6 kwaye umyeni wakhe ubonakalisa ukuba uhamba kuluhlu lwakho. Kuyandonwabisa kwaye sele ndiqalisile ukuba ngumthengisi (izipho) kunye naye kwaye oko kuyamkholisa ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba ndiziqhele ezo nkcukacha kwaye xa ndiye kuye kwaye ndingamziseli nto, uyandibuza okanye enze iziqhulo naloo nto! Ngaba ungazithanda iinkcukacha kwaye ukwinkqubo yokwenziwa komzimba okanye unomdla ???? Ngokucacileyo okwangoku uyazi ukuba ndinomdla kodwa andikhange ndimvuselele kuba ndifuna ukonwabela kancinci!
Ndiyacacisa uyayazi ukuba imeko yam yezoqoqosho ngokungafaniyo nomyeni wakhe intle kakhulu.
Enye inkcukacha xa sithetha akakhange ayikhankanye indoda, kwaye xa esenza njalo uzibiza ngokuba "ngutata wentombazana." Ndiyabulisa ndiyazibulela izimvo zakho
UFARABUNDO MARTI sitsho
Xa ndandisemncinci kwaye ndiyintombi, omnye wabazala bam wayenobuhle obupheleleyo (umzala wezopolitiko), ngotshintsho umyeni (umzala wam wokuqala) wayegcuma nenye intombazana. Ebenesithukuthezi, wandihlukumeza, wayenxiba ii-minis, engenazimpahla zangaphantsi… ibiyimfazi ebrama !!! Njengomntu ongenamava, bendisoyika kwaye ndithatha ithuba, kude kube lusuku olunye olulungileyo ndadinwa ndagqiba kwelokuba ndiye esiphelweni. Ngaloo mini ndayeka ukuba msulwa, wayetshatile kodwa engakhathalelwanga, ndingavuma ukuba wayengutitshala wam, sasithandana ngaphezulu kweminyaka emi-5, umzala wam noloyiso lwakhe, wayengafuni ukuya kweyakhe ishishini ... NAMHLANJE NDIBONA UKUTHI XA UMFAZI EGQIBA UKUZE AZIBEKELE AMAHORA KUWE, AKAYENZI IMIHLAHLA ... NGENXA YOKUTHABATHA, UKUNGANELISEKI OKANYE NGOBA UYAYITHANDA IBURLESQUE ...
NDINOKUTHI AKUKHO MNTU ONGAKHETHI AMABHINQA AQHUBEKAYO, OKANYE ABAQHUBEKAYO, NGABO ABAYIMISELAYO LE NKALO, ABANYE BAYAQALA KODWA EKUGQIBELENI BAZIMISELA ...
AKUKHO NANTSI EFANELEKILEYO KUNOKUVIMBELA NESIQHAMO SANGAPHANDLE ...
Phendula FARABUNDO MARTI
Ndihlala ndinamava amnandi kunye namantombazana aphuma kumabanga aphakamileyo, kwisikolo esiphakamileyo nakwikholeji. Ukuwugqiba kwam umsebenzi wam wokuba ngugqirha wotyando ndandineminyaka engama-25 ubudala, intombi endandiyithanda kakhulu kwaye endandicinga ukuqala ngayo ikhaya. Ngelo xesha ndandingumKristu, naye wayenjalo kwaye nangona ndandithembekile kunqulo lwam kunye neenkolelo zam, abafazi abangaphandle kwinqanaba lam lenkolo bajikeleza. Nabanye oodade ecaweni bebendincwasa. Ngesinye isihlandlo udade wandicela ukuba ndibekelwe amazinyo, ingqiqo yayikukunyanga umhlobo wakhe ... Lo dade wayesondele kakhulu kum, kuphela andizange ndimnike, ndandingenakuthetha xa ndidibana nomhlobo wakhe, ummangaliso womfazi, kuphela ukuba unesiphene (utshatile kunye nentombazana encinci). Balwa phakathi kwabahlobo, ndaqala ukuthandana noGRECIA FABIOLA, ndamthanda ngendlela engazange yabonwa ngaphambili ebomini bam, ndaphela yintombazana yam engumKristu, bandigxotha ecaweni, usapho lwam luphela lwaluchasene nobu ubudlelwane obabungavumelekanga nobungekho mthethweni, kuncinci kuye nakum, bendihlala idyll, uthando olukhulu, nangona ewe ... ibineziphumo zayo. Kungekudala emva kokuba ndihambile ndaqala ukonwabela ukulala ngesondo njengoko ndingazange ndonwabe kude kube namhlanje, ndamenza ukuba akhulelwe kwaye eyona nto yayimbi xa usapho lwakhe lwezopolitiko lwafumanisa, ngenxa yokuba waya esibhedlele, ngenxa yokukhulelwa okusemngciphekweni ... Umyeni umsuse, emveni kokophula UMAMA wam !!! Ndaye ndagxothwa emsebenzini, abahlobo bam bayeka ukuthetha nam, owokuqala ukundifulathela yayingumama, phantse ndalahlekelwa yiyo yonke into, yonke into, inkolo yam, iintloni zam, ndayeka nentombazana endiza kutshata nayo endimtshabalalisileyo…. Namhlanje ndihlala ndizolile kwaye nangona kuvakala njengebali, kuyinyani. EKUKHUMBULWENI KOLUTHANDO OLUKHULU, NDIKHUMBULA UGRECE FABIOLA JIJÖN VERGARA, KWAKUKHO UMNTU PHAMBI KWAKHO, OKANYE UMNTU EMVA KWAKHO, NAKUBA UTSHATILE.
juan hernandez sitsho
Phendula ujuan hernandez
ICornelio Lliguicota sitsho
Ndiyamthanda umfazi otshatileyo kodwa andazi ziphi iindlela zokumoyisa.Ngaba ungandinika ingcebiso ngeFB?
Ndiyamthanda umfazi otshatileyo kodwa andazi ukuba zeziphi iindlela zokusebenzisa ukoyisa.Sisebenze kunye iminyaka emithathu.
Kulungile, besele ndimxelele ukuba uyandithanda kakhulu Kodwa xa ndifuna ukuthetha amazwi othando ndiba neentloni kakhulu
Ndifuna undinike ingcebiso
Cristian ba sitsho
Iimpawu ezintle zeYigolo zekhonkco, ziya kundikhonza kakhulu ngenxa yezenzo zam ezintsha. Ndihlala ndisithi nditshilo kwaye ndiza kuthi, bafazi, kuthi amadoda abalulekile, kwaye ngakumbi endlwini ……
kakhulu kwaye ndilinde ezinye iingcebiso kwimizekelo
Phendula u cristian ba
Ungalibali ukuba kubalulekile ukuba owasetyhini azithembe kunye nomntu oqinisekileyo ngesiqu sakhe.
UGuillermo URbanos sitsho
Kwimeko yam ndihlala ndihamba emva kwedama, kukuzalwa kum ... ndihlala ndikhathazeka kwaye lowo undimisayo ndibeka izinyo lam kuwo. Kutshanje kuye kwawa umntu ukuba bendikhangela unyaka ... Supestamente wathandana, wandixelela ukuba ndibutshabalalisile ubomi bakhe ... kodwa ndalala naye kwaba kanye kwaye andisaqhubeki kuba umfazi wam sele endibambile kwaye ndinomntwana ngaphandle komtshato. Ndiyaxolisa ngokungaqhubeki naye, kodwa ndiza kungena engxakini enkulu
Phendula kuGuillermo URbanos
Ityala lam lelokuba, ndiyayithanda igefa yam kodwa utshatile unabantwana aba-2, ndineminyaka engama-21 yena una-29, ndingenza ntoni?… Ndihamba naye iminyaka emibini kwaye ngoku ndifumanise ukuba ndimthanda kakhulu, Ndingathi. Nceda ukuba umntu unakho ukundinceda imeyile yam zxavier-13@hotmail.com
Nangona ndingugqirha, mandivume ukuba ndingowokuqala kuyo yonke into eyindoda, emva kokuba ndinengxaki yobuntu, NDIYEDLULA, ngokweengcinga zengqondo kunye neencwadi ezinje ngeDSM V, kunye neeCIES 10…. Ngapha koko, ndiyayivuma, kodwa eyona nto iyiyo kukuba xa ndiphatha umfazi njengesigulana, into yokuqala endicinga ngayo ngokumlukuhla, ukuba utshatile kakhulu. Ndiyazi ukuba ayilunganga, eneneni ndibeke uninzi ebhedini, intandokazi yam iphakathi kweminyaka engama-35 nama-45 ubudala. Ngokutsho kweengcali, bathi ubudlelwane bamandla busekiwe apho isigulana sisesichengeni, kwaye ugqirha ngulo olawulayo, okanye onamandla, hayi kuphononongo jikelele, amabele, isisu, ubufazi, njl. kodwa nakwinxalenye esebenzayo, yesondo kwaye ufumanisa malunga nokusilela okuninzi, iminqweno kunye nokudana, ngoku ndiyabona ukuba kuye kwafuneka ndizinikele komnye umsebenzi, kuba ndiyaqonda ukuba ndibuthathaka kakhulu ... nangona kunjalo ngenxa yezizathu zomthetho ndingena kumlo omkhulu, kuphela ukuba ukunqanda oku, ndingumkhohlisi kangangokuba ndiqala ngokuzuza ukuthembela kwabo, emva koko ndizame ukuzithengisa kwaye ndizenze ndiyimfuneko kubo, ndizama ukudala ukuxhomekeka emva koko itafile setha ... Yile ndlela baninzi ngayo abafazi abaye bamatsha ebomini bam, ndiqala ngokubamba isandla, lo mnxibelelwano ulula uyababulala, emva koko ubavumele bafune isenzo kwaye ngale nto ndithetha ukubanga, emva koko ndibahlekise ukuze babuze Ibhedi ...
Andikwazi ukunceda, abafazi kukuwa kwam
Ndiva kabuhlungu, ungandinceda?
Molo Ana, sixelele ukuba singakunceda njani
Ndifuna ukufunda okungakumbi malunga nendlela yokoyisa umfazi otshatileyo
Ukufunda eli nqaku kundenze ndaba neentloni. Sisimemo sokukrexeza nokungathembeki. Yintoni engenantloni.
INTLAWULO CASTELLON sitsho
Iingcebiso ezigqwesileyo… .Ngamanye amaxesha umntu akajonganga «iimeko» ezinikiweyo ... Kuyandinceda ukuba ndibaxabise ngakumbi abantu basetyhini kwaye ndingabahlekisi ... ubaphathe njengamanenekazi okwenyani.
Phendula u-FE CASTELLON
Hayi, ndingathini…. Igcwele zizibongozo kwaye bafuna nje ukuba silale, kwinto endiyifundileyo kwaye ndilungile…. Ndivuyisana nabo kuba noomama babo batshatile, endikucebisa kuwo wonke umntu! ° !! kukuya kwisikolo samabanga aphantsi ukuze bafunde ukubhala kwaye bangazi nto, kwaye ndicinga ukuba bonke abo babhala apha babi kuba bayathanda ukufudumala kakuhle, indlela yokuthetha ... kulungile, omnye umntu ubisi !!!! Akunakwenzeka ukuba bacinge ukuba umfazi otshatileyo ufuna ukuziqengqa ngolu hlobo komnye wenu, kwimeko apho bonke abo baphumelela uloyiso baya kuba ngaphezulu kokulula. Kodwa ke, bayayithanda kulula kwaye yenzeka ngokukhawuleza.
Yiya esikolweni !!!!
hahahahaha !!! HAHAHAJAJAA! Kodwa masibone…. Enjani yona imanga engenangqondo! Ngaphandle kongenelelo lwe-3, okuseleyo "lusizi". Inqaku "(njengoko umntu elibiza njalo) lilula kakhulu ... kwelinye icala (usenokuba uqaphele ukuba NDINGUMFAZI), ndiyoyika ukuba uninzi lwamadoda luthatha loo migca njengento enomdla kwaye engenakusilela!
Madoda, wonke umfazi uhlukile. Yonke imitshato yahlukile. Ngokucacileyo abanye baya kusilela "into" kubomi babo betshatile kwaye abanye baya kuba "nokufikeleleka" ngakumbi, kodwa le nto YIMPILO YABANTU EFANELEKILEYO, HAYI IMEKO YABASetyhini.
Ndinoluvo lokuba "inqaku" kufuneka libhalwe ngumntu omncinci kakhulu kwaye / okanye ongenamava. Njengokuba elinye lamagqabantshintshi lisitsho: »Ndingatsho ukuba umntu akabakhethi abantu basetyhini abo abathandayo (….) Umntu angaqala kodwa ekugqibeleni bamisele ...». Abasetyhini bahlala besazi xa "behendwa" kwaye uninzi lwabo luvuya kwaye luvumela ukuba "banconywe" ngaphandle kokuthetha ukuba baya kuhamba phambili (ngokungafaniyo namadoda amaninzi ane "maqhinga" amancinci kunye nezixhobo eziwela kwiminatha yabasetyhini).
Madoda, manumzana ... LUMKANI, iintolo zihamba zombini iindlela kwaye zigcine engqondweni ukuba uninzi lwabasetyhini bayathanda ukuba "nabahlobo" (hehe) abanomdla kwaye "baqonde" nabo abangasoze baphinde babhekane nabo phambili. Nditsho oku kwabo bafuna into engaphezulu kwempambano. Nabani na odlala ngomlilo, bathi, uphela evutha!
Ngapha koko, eyona ithamsanqa kubo bonke (uya kuyidinga!) Kwaye ukuba ndinokuba neengcebiso, musa ukuzenza ngathi uyazi abantu basetyhini ngokubanzi. Gxila kwenye kwaye uya kuba nemisebenzi yobomi bonke!
Wowu! Ngenyanga leyo umkile umakazi omangalisiwe ... unyanisile ... ungoyena mfazi ugqibeleleyo ... kuphela unesiphene ... »FUCK !! UTSHATILE!!! INDLELA YOKUBONISA UKUHLEKA"
UMNTU OYITHUMELE KUM USAMANGALISEKILE KWINTO EYENZEKILEYO, NJENGOKO ETHI WAYENZA LE NTO WABUZA INTO ENDICINGA UKUBA NDINGAYICINGA UKUZE NDIPHUMELELE, MASIZAME. * Ngokwakho zitsho igama lomntu ekuphela kwakhe wesini esahlukileyo ofuna ukuba naye (amatyeli amathathu ...) ... * Cinga ngento ofuna ukuyifeza kule veki izayo uphinde uyiphindaphinde (amaxesha amathandathu ) ... * Cinga ngento ofuna ukuba yenzeke phakathi kwakho nomntu okhethekileyo (oyithethile ku- # 1) kwaye uyitsho ngokwakho (amaxesha alishumi elinambini)… * Ngoku yenza umnqweno wokugqibela nowokugqibela malunga nomnqweno owukhethileyo. * Emva kokufunda oku uneyure e-1 yokuyithumela kwizihloko ezili-15 kwaye into oyicelileyo iya kuzaliseka kwiveki e-1. Okukhona abantu ubathumela, kokukhona umnqweno wakho uya usomelela. Ukuba ukhetha ukungahoyi le leta, into eyahlukileyo yomnqweno iya kwenzeka kuwe, okanye oku ngekhe kwenzeke ………… .. Yanga imihla yakho ingazaliswa yimpumelelo kwaye ubusuku bakho bamaphupha ukope kwaye uncamathisele oku kwizihloko ezili-15 okanye +
Nawuphi na umntu obhinqileyo angawa kwelona xesha lilindelweyo uClaudia andiboni nto ingavuthiswanga kule migca ibibhalwe ekuqaleni enyanisweni ibalisa yonke into ekufuneka yenziwe kwaye ixhomekeke kumntu ngamnye ukuba abe nokuqonda kokusebenzisa ingcebiso elona xesha linobulumko, lonke ubudlelwane bunamahla ndinyuka kwaye eyona nto iphambili kukufumana ukuthembela kwixhoba elichaphazelekayo ukuze yena ngokwakhe akuxelele ukuba uhlasele nini, ekuphela kwento engawiyo yezo zomeleleyo ngokomoya kwaye zizinikele kuThixo, kodwa njengakweli hlabathi lithetha ukuba uninzi lwabantu luyalityalwa ngoThixo kwaye luxhalabile ngakumbi ngokuphila kwabo, kulungile, unokucinga, ndicinga ukuba ndiyagula kancinci, ndiyakonwabela ukulukuhla abafazi abatshatileyo kwaye xa ndibenza baqiniseke ukuba banento nam, ndiye ndenza umva hahaj Ndonwabile ngakumbi kwabo baqhayisa ngokuba ngekhe benze into enjalo kwaye imibuliso iyawa, kucacile ukuba abasetyhini bahlala inyathelo elinye emva kwethu
Molo, ndinamaphupha kunye nenenekazi elineminyaka engama-35 kwaye unentombazana eneminyaka eli-16 ubudala kwaye bayandincwasa bahlala phambi kwendlu yam kodwa andazi ukuba ndirhwebesha njani u-2 ngaxeshanye kwaye ndibenabo ndibeke endlini yabo
Eli nenekazi lakha landichukumisa landixelela ukuba liyayithanda incanca yam kwaye intombi yakhe indiphuze emlonyeni ngempazamo ekoneni inyani kukuba bobabini banomzimba olunge kakhulu kuba banesifuba esikhulu kunye nempundu entle
Ndincede, ndenze ntoni? Andisazi ukuba ndithini kwakhona
imeyile yam yile joaquin_daz@hotmail.com
Molo ndiya ekholejini kwaye ndadibana nentombazana endiyithandayo kakhulu, kodwa itshatile, yandixelela ukuba inengxaki nomyeni wayo, ndiyayithanda, kodwa ndicinga ukuba ayibonisi mdla kum okanye Andazi ukuba ndingamnqoba njani, kodwa andazi njani.Ndiyazi ukuba mandithini, kwaye i-ps andinakuyeka ukucinga ngaye, uyandiphambanisa, undiphuze kathathu kuphela umlomo ndamxelela ukuba singamakhwenkwe kwaye kwathatha ixesha ukundinika impendulo nguewe kodwa ngomqathango omnye wokuba masibe nobulumko, kodwa ndicela ukumanga okanye ukugona angafuni ukundinika. okanye undiphuze esidleleni and hug ngathi ibilusuku lwam lokuzalwa.
Andazi ukuba ndenze ntoni ukuze ilingane nam.
Molo ukuba ndinguNatan ovela eRcia Chaco kwaye inyani kukuba ndiyangqina kuwo onke la magama melozas xq anjalo ke umfazi wadalelwa inkampani yendoda ngaphaya kwenqanaba lenkohlakalo mhlawumbi thina njengendoda esikholelwa ukuba banayo. Ngale nto kufuneka sinciphise ukuba ngamadoda kwaye sikholwe ukuba yintoni efunekayo emfazini ukuba simbone emhle kwaye simfuna ngakumbi
Molo, ndinguNatan, into efanayo yenzeka kum kwakhona. Ndidibene neli bhinqa liselula linomtsalane ngenxa yokuhomba kwalo kwaye lihle ngesiqu somzimba walo, wanditsala ndathandana kwaye ndiyamthanda tb kodwa utshatile. Kungoko ke sithathe isigqibo sokwahlukana naye x iingxaki zokuhlangana nokubuyela ecaleni kwakhe x imeko yeso sijeziso siyaqhubeka. Yeyiphi kuyo yonke le nto andibuze yona xa ndibuya ukuze sibe kunye izinto ziyakwahluka, ndicinga njalo kwaye ndiyathemba ukuba ndiyamthanda kwaye ndiyayithanda. uNatan kunye no-gabriela
Kodwa kuthekani ukuba umntu obhinqileyo, ngaphandle kokuba nendoda, unentombi eneminyaka eyi-1 .. Ingaba likhona ithuba? Ewe, ndiyayichaza imeko yam .. Ndiqinisekile (50%) ukuba usaziva into mna .. okanye ubuncinci wayiva esikolweni ... nokuba indoda eyimfama iyakuqaphela. Andazi kwanto ngalo mfazi iminyaka emi-5 .. ukuba ndicinga ngaye kungenzeka ukuba naye ucinga ngam ... Ndiyazi ukuba ndifuna ukwenza ntoni akuqhelekanga, kodwa ndiyayithanda kwaye andiyiyo ndithetha ngomzimba wakhe kuphela .. Mva nje ndimbone kwezinye iifoto kwaye uyamangalisa, zonke iinkumbulo zakhe zeza kum ngokukhawuleza .. Ndinecebo lam, ngoku umgama uyasahlula .. Ndifuna ukumtsalela umnxeba, kwaye andazi ukuba njani, kodwa kuya kufuneka ndiqonde ukuba ufuna nyani na ukuba ndihambe .. bubuqili kakhulu, ke kufuneka ndibanike ingqalelo ... inyani kukuba ndiza kuhlala ngokumbona kude okanye ukuva ilizwi lakhe .. Ukuba kukho umntu onokuthi andicebise ukuba ndiyifezekise, ndingavuya ngonaphakade.
Ngokwenxalenye banyanisile koko kupapashiweyo, kodwa akufuneki siphume ecaleni kwabo (njengoko besitsho kumhlaba wam), akukho mfazi unzima, kuphela ibhatyi embi, ukuba uthanda umntu, yiya kuye , thetha naye, kodwa okona kubalulekileyo, mmamele… uya kukuxelela ukuba ufuna ntoni kwaye ufuna nini…. into ethi
Ngokwenxalenye banyanisile kwinto epapashiweyo, kodwa akufuneki uphume endleleni yakho (njengoko besitsho kumhlaba wam), akukho mfazi unzima, kuphela ibhatyi embi (iqhinga), ukuba uyamthanda umntu, yiya kuye , thetha naye, kodwa okona kubalulekileyo, mmamele… uya kukuxelela ukuba ufuna ntoni kwaye ufuna nini…. Into endisebenzelayo kukuthetha nabo ngendlela engakhathaliyo… ngokungathi abanamdla wam…. kuba ukuba kukho into etsala abantu ababhinqileyo kukungakhathali ... bahlala beziva behle kwaye abanakuma ukuba umntu angabathathi ngoluhlobo ... kulungile ... ndizithandile izimvo ... ndiyathemba into ekhoyo iya kubakhonza kakuhle ...
Ndandineminyaka embalwa ndigcina ubudlelwane kunye nomfazi otshatileyo kwaye nam nditshatile, ndathandana, ngoku besikhohlakele okwexeshana, ndenza ntoni, andazi ukuba ndingamoyisa njani kwakhona kwaye Sele sazana kakhulu, iikhowudi, ndicinga ukuba yinto yesiqhelo, umona nabanye. BEKUNGAFUNI UKULAHLEKA KODWA NDICINGA UKUBA NDIYAFUNA IINGCEBISO UKUZE NDIBUYELE EMVA, ndiyathemba ukufumana iingcebiso, enkosi kwangaphambili
NGAPHAMBI kokuba ndithethe ndinguGqirha, uninzi lwabasetyhini luza eofisini yam, uninzi lwabo lutshatile ... kuyenzeka ukuba intombazana eneminyaka engama-23 ubudala yeza apha, yatshata kudala kwaye njengoko siqala ukuzithemba uxelele mna ukuba angadibana nam ... Ndasivuma isicelo sakhe, phakathi kwezinye wandixelela izinto umyeni wakhe engasamhoyanga ... wavuma ukuba uyandithanda kwaye kuba kwakungekho bantu kwaphela ngala mini e ixesha azimase ngalo ndaye ndagqiba kwelokuba ndimange ... oomoya babeshushu, kodwa ngenxa yokuhlonipha indawo endisebenza kuyo ndamxelela ukuba andifuni kuyenza apho… wacaphuka wemka…. Uchithe iinyanga ezi-2 engambonanga kwade kwafika nje kutshanje, kodwa akazanga yedwa ... intliziyo yam iphantse yawa ngenxa yokuba kungene umyeni wakhe kuqala kwaye naye ebesezingqondweni ... ndilungiselele yonke into ngezimbalwa Imizuzwana ... kuye kwavela ukuba umyeni wakhe uza kudibana ... ngamava amabi, okokuqala kuba kufanelekile ukuba waphule ubuso bam, ke ngenxa yokuba andikhange ndibe nomthetho wokuziphatha kwaye emva koko bangandimangalela. ... Ndaziva ndisisidenge, imibala yayisebusweni bam, ndandingakwazi ukuthetha. Kwaye eyona nto ibuhlungu kukuba umyeni wakhe upholile, ndaziva ndingoyena mntu ... ndacinga ukuba kuzokwenzekani ukuba ndingaya kwenye indawo nomfazi wam kwaye kwavela ukuba wayenomntu kwaye mna ndingazi, ndiziva ndilusizi…. Kwiintsuku ezimbalwa kamva le ntombazana yabuya kwaye inyani kukuba intle. Undixelele ukuba ebehamba eyakhe into, ndizive ndisisidenge kathathu, ndiyabona ukuba kuyingozi kakhulu ... into endikhathazayo kukungazi kwalo mfazi, kuba ukuba ebenako ukundizisela umyeni wakhe kwaye enze kakhulu ukungakhathali kwaye emva kweentsuku ezimbalwa zibuyele kum. IT ...
molo… ..inyani linyathelo lokuqala ngaphandle kokwazi ukuba ndiyisebenzisa, ngokulula
Kuya kufuneka uqhubeke nokondla oko kukwenza uzive ugcwele, apho ndithetha ngayo kwaye ndikholisa inyani ineengxaki kunye neqabane lakho langoku kodwa ndiyakholelwa ngokuthembekileyo ukuba ndizakuphela naye ebhedini .. .. ukumnika ukuphelela ukuba ngumfazi, kuba inyani Inenekazi lihle, ngaphandle kokuba likrelekrele, linomzimba omkhulu amanye amabhinqa aselula angathanda kwaye ndiqala ukucinga ukuba sisidenge seqabane lakhe engasafuni ukuya kulo kuye, zombini ngokwasemphefumlweni nangokwesondo, kuba inyani ndiyambona efuna ukundinika i-shag nam, kodwa kunjalo. …… Ndisemlwelwe wokufumana iseshoni elungileyo kunye naye.
Izimvo ozipapashayo zilungile kakhulu, zindincedile, enkosi
Inyani kukuba ndikwimeko efanayo, kukho izinto eziyinyani, ndiyamthanda umfazi wasemsebenzini wam kwaye ndiyazi ukuba naye uyamthanda, kucacile utshatile nendoda kwaye banabantwana ababini, una7. iminyaka indala kunam kodwa mna Iyanditsala ... Ndiye ndaqonda kancinci kancinci ukuba ukwinqanaba lokuzonwabisa kunye neqabane lakhe kwaye kanye xa ethetha naye ndiye ndabona ukuba akafuni kuyamkela, ngalo mzuzu ngelaxesha ndaya kuye ... andazi nokuba le nto ndiyenzileyo ayilunganga okanye ilungile, inyani kukuba ndambamba ngengalo ndamncamisa, ndazisa umlomo wam endlebeni yakhe ndamxelela ukuba ndiyamthanda Ngosuku lokuqala ndambona ngalo ... wayethule kwaye ukusukela ngala mini ebendilinganisa kancinci kakhulu nendlela endicinga ukuba izakuba yiyo ... umbuzo ke ngowokuba oku kundikhonze kakhulu kwaye ndifundile Kuninzi ndiyathemba ukuba ndingamoyisa ... Ndiyacacisa ukuba andikwenzi oko ukuchitha ikhaya alenzileyo, kungaske ndimse ebhedini, ndiyamthanda loo mfazi kwaye ndifuna ukuba naye ubukhulu becalaixesha elinokwenzeka ...
Ewe, andazi ukuba inqaku lilungile, kodwa ndicinga ukuba kufuneka siqwalasele intetho ethi "ngentonga oyilinganisela ngayo uyakulinganiswa" umngxuma onobuqili ... ngcono ugcwalise onayo ekhaya uyeke ngaphandle ... ekugqibeleni onke amadoda afuna i-cu ... enye ... kuba umkhathalele okanye uphambene ... kwaye ukuba uyayenza ke yintoni isidenge ... ... ha ... kwaye ngakumbi idiotic umfazi oyidalayo ... ha
LUIS othandekayo, kuyabonakala ukuba khange uphile, bobabini abesilisa nabasetyhini benza impazamo yokucinga ukuba ukhuselekile kwiqabane lakho, siyaqikeleleka, sibe nesidima, ekuqwalaselweni, kubukrelekrele kunye nothando, kwelinye icala abafazi bayashiya ukuba bayazilungisa, baye bangakhathali nomntu wabo ... oku komntu ozelwe njengomzingeli onje ngo "I" kukufa ... oku nako kuza kulala, awazi ukuba yintoni ukutya ngokufanayo "isonka ngokufanayo". Abanye abantu basetyhini bafanele ukulaliswa ebhedini kuba bengazi ukwenza enye into, ndiyitsho ngaphandle kokufuna ukukhala ngamehlo, ngelishwa uyabeva bethetha kwaye kungcono ukubavalela, njengamadoda amaninzi asinanto ebuchotsheni, umzekelo wena ... xa uthuka isandla sasekunene Kwaye wenza okubi akwenzi nto ngaphandle kokutyhola ukusilela kwakho, andazi ukuba imfundo, kodwa ukuba unamava, XA UFAKA AMEHLO AKHO KWOMNYE UMFAZI KWEYAKHO, kungenxa yokuba indoda njengezinye izilwanyana ezingamadoda ziyilelwe ukuhlwayela imbewu kwelinye ilizwe, oko kukuthi kwamanye amabhinqa. Xa ndithetha ngale nto, ndithetha ukuba nethuku lokusasaza imbewu yakho kangangoko kunokwenzeka, ukugcina iintlobo okanye ufuzo lwakho, kodwa nantsi umahluko kuba uninzi lwethu alunanto ngaphandle kwee-2 neurons, kwaye ubuntu buyazalwa yiyo loo nto ukuba siyazahlula kwezinye izilwanyana ndicebisa ukuba ufunde u-MARX, ucacisa konke oko, umzekelo kukuba ucinga ukuba uthenga ulonwabo ngamaringi, ngamaphepha asayiniweyo, kodwa into oyenzayo kukuthenga umfazi onamalungelo noxanduva, oko kukuthi ubukhoboka bakhe buqhubeka, xa umntu obhinqileyo engathembeki, uyawaqonda amandla akhe okuthatha izigqibo nokwenza kwaye oko kusenza singcangcazele, ke ukungathembeki kunzima kakhulu kunokukhangela umntu oza kulala naye Kwimeko apho ungazi, abafazi Abathembekanga kunamadoda, kodwa banobuqili ngakumbi kwaye abahambi beqhayisa njengathi, thina njengamadoda alungileyo sithetha ngoloyiso lwethu, kodwa bayasifundisa, kwaye bayakwazi ukugcina iimfihlo zabo. INDLELA ENDIHLONIPHA NGAYO KWABASetyhini ABASIHLALE EYIMFIHLELO, ABAKHUTHAZA IMFUNO YAM YOKUBA ndibazi… EMMANUEL
Ewe, ndilithandile inqaku kwaye inyani kukuba, ndinayo neyam! Ndineminyaka emi-5 nditshatile kwaye usibali wam uyafana.Kodwa kuthe cwaka ndimthandile kwade kwayile langa namhlanje.Besoloko bejamelene kakhulu ngaphandle kwamazwi.Ndaye ndagqiba ekubeni ndithethe naye, akazange yitsho nantoni na kum! Cinga, wuuuao! Kuyinyani oko bathi uthando aluboni kuba ndafunga ukuba waziva okuthile ngam. Ukujonga kwakhe, ukundiphuza kwakhe esidleleni kukhulu, msm yakhe ... Yonke into ibonakalisile ukuba nam ndiyamthanda.Kulento bendimxelele yona, akasandibhaleli kwaye uzama ukundiphepha! Ndiyenzile nam ngoba ndiyayiqonda ukuba ndiyamenza angakhululeki, kodwa izolo ndimbonile, sabulisana ngokwanga kwaye eyona nto ilahlekileyo yayikuku tokr imilebe yethu! Ndizama ukungakhathali kum kodwa andazi, bekubonakala kum ukuba uyazenzisa.Ndicinga ukuba into anayo kukuba akafuni ukusilela umntakwabo, ukutshabalalisa into ayakhile kangaka kunye nentuthuzelo yakhe! Ndiyayiqonda ngoba le nto iyenzeka kum, kodwa kuyothusa ukuba njalo.Bandixelele ukuba ukungakhathali xa kusenziwa inkohliso kungenxa yokuba kukho uthando okanye kuba besoyika.q yakuba nje yonke into ifunyenwe, kusenokwenzeka Ukuba kukho into eyenzekayo phakathi kwezi zimbini kwaye iyandoyikisa, nokuba yeyona nto ndiyithanda kakhulu ndicinga ukuba yile nto yenzekayo kuthi, uloyiko lokwazi ukuba siziva enye into kunokuba siyicinga!
Kuhle kakhulu ngoku ukuba ummelwane wam uzikhathalele kuba unomfazi endandihlala ndithanda ukulala naye
Ndiyithandile inqaku kwaye ndingathanda ukwabelana ngamava am, mhlawumbi kungekudala ndiza kuthi!
Njengoko ndacebisa ngenye imini, ndigqibe kwelokuba ndibalise amava am; Ndiyathemba ukuba iyonwabisa kwaye iluncedo. Injongo yam ikude nokuphembelela nabani na ukuba alingise isimilo sam; Ukuba inokubangela umdla, ndiya kuba ndiyifezekisile injongo yam.
Imeko ibuyela emva kwiminyaka emine: Ndilinenekazi eliqolileyo, ndonwabile emtshatweni; Ndiyazijonga kwaye bandithatha njengonobuhle kakhulu, ndinomtsalane kwaye ndinobuntu obuchazwe kakuhle; Ndiyindoda (andinakukunceda), ndiyabathanda abantu abanesibindi nabanamandla. Njengoko ndicinga, njengabaninzi, ebusheni bam ndandinothando oluhle kakhulu; Ngenxa yeemeko ezingabalulekanga, wandishiya kwenye, endingazange ndayibona okanye ndiyazi. Ubenzile ubomi bakhe kude nendawo endikuyo. Kwakunzima kodwa ndadlula kuko. Emva kobudlelwane obuninzi, ndadibana nomyeni wam emsebenzini wam njengomsebenzi waseburhulumenteni kwaye emva kobudlelwane obufutshane kodwa obunzulu satshata.
Nditshatile ndonwabile iminyaka emininzi ndinobomi obuzolileyo nobungenabudlelane.
Iminyaka emine edlulileyo kwaye kwimeko yokunyanzelwa ziimeko, ndaye ndadibana, emva kweminyaka engama-30!, Ebengumntu wokuqala kum ukuthanda.
Bekusekuvukeni kukayise endikuxabisileyo. Ndiyazi ngobomi bakhe kubantu besithathu kwaye wayenomdla kwelam.
Intlanganiso esibe nayo yayiyimeko engakholelekiyo ngenxa yento eyenzekileyo. Umyeni wam akafumananga engafanelekanga ukuba siye kuvuka, nangona ndibonisile ukungathandabuzi malunga nentiyo yam efihlakeleyo kwisidala sam.
Ndizichaza ngokungaphaya okanye ngaphantsi ngokuchanekileyo ukudibana endikuchaze ekuqaleni njenge-cheeky, phantse ukuba krwada, kunye nokuziphatha gwenxa.
Xa wayesibulisa kwindawo ethe yahlukaniswa nosapho kunye nabahlobo, wandixelela:
«Patri, okokuqala ndiyabulela ngokuza kuvuka kukatata, ndiyazi ukuba uyixabisile kwaye okwesibini kwaye nangona iimeko zingezozo zilungileyo, ndiza kukuxelela ukuba khange ndikwazi ukulibala kuwe yonke le minyaka; Ndiyazi ukuba ungandingcikiva kwaye ulahle izinto ezininzi ebusweni bam, kodwa ndicinga ukuba kufuneka sibe nethemba, uyazi ukuba bendihlala ndikuhlonipha kwaye ubudlelwane bethu abuzange bufezekiswe, owona mnqweno wam mkhulu kukuba undenze owakho kwaye ndenze ngowam. Ayinanto yakwenza nomyeni wakho okanye umfazi wam, yinto phakathi kwakho nam, eqala ubudlelwane ngendlela ofuna ngayo. Ngoku ndizokushukumisa uhambe kakuhle kwaye ndizokushiya iphepha elinenombolo yam yeselula. Ukuba kubonakala kufanelekile kuwe, ndibize, ndiyathemba njalo kwaye uyazi ukuba ndiza kukunika lonke uthando lwam, ukuthantamisa kunye nothando.
Ndingumfazi okwaziyo ukuphatha zonke iintlobo zeemeko kwaye uqinisekile ngam, kodwa ngekhe ucinge ukuba ndihleli njani, «ndoyikekile kukuthetha kancinci». Impembelelo yomsindo, intiyo kunye nokothuka kugcwele engqondweni yam, andinakukwazi kwaye khange andinike thuba lokuthetha, ushiye iphepha ebelisesandleni sam xa esithi ndlela-ntle kwaye engakhange aqhubeke.
Ukuba kunye nomfazi otshatileyo kuyinto entle kodwa ukuthandana kunganobungozi kuni nobabini kufuneka nicace malunga nenjongo yenu nobabini ngaphandle kokulimaza abanye abantu kunye nokuqonda okuninzi ngelixa ubudlelwane buhlala kuba oluhlobo lobudlelwane alunakubakho okokugqibela, abahlobo abakhohlisi nokuba umfazi otshatileyo umnika into abangenako ukumnika yona, cacisa nabo kwaye bazobona ukuba kuyakubakho isiphelo esimnandi ngaphandle kokulimaza mntu, masicace gca, umfazi otshatileyo simfuna alale kwaye umonwabise ngokumnika into asweleyo, uthando oluthile alunikiweyo.Ulahlekile, kodwa masingabhidanisi iimvakalelo zakhe kwaye worse masingathandani naye khumbula utshatile unendoda nabantwana mhlawumbi Unyamezele le nto uyonwabelayo, bubudlelwane nje obuhle
Ewe, ndisenawo amathandabuzo, kuba ndisesikolweni samabanga aphakamileyo ndaqonda ukuba umakazi womyeni wam unengxaki nomalume wam wegazi, kuba wayenxila kwaye elikhoboka leziyobisi, kuba ndicinga ukuba abantu basetyhini kunye namadoda bayasijija ukungonwabi, iimeko zesiqhelo kunye neengxaki kunye nokugwetywa ekhaya. Ngenye imini ndambona ephantse walila kwaye, ngaphandle kokuzimisela ukungena ebomini bakhe, ndasondela ukuze ndizinike isihlobo, sathetha ngale nto nokuthi (izinto eziqhelekileyo neziqhelekileyo), de waqala ukucacisa ngendlela umyeni wakhe awayehamba ngayo sele engamthandi, wayenomona ngaye kwaye wayemhlukumeza ngeendlela ezininzi ade aphantse ambethe; Ngenye yezo ntsuku wayencike emathangeni wam kwaye ndaziphulula iinwele zakhe ngaphandle kobubi, wabeka isandla sakhe esifubeni sam nanjengoko elila, wayithoba kukuphakama kwebhanti lam, oko kwandenza ndaphuma kumtshangatshangiso ukusukela njengazo zonke Indoda iphilile ipipi yam ikhule ngokukhawuleza kodwa ngenxa yendawo eyayikuyo ipenisi yam, ndandingakhululeki kuba iqhuma lalicacile, kuba wandixelela: kwenzeka ntoni? Kutheni le nto ifike ngoluhlobo? Bendicinga ukuba izakuthatha into kum ngathi ndingumakazi wakho okanye uzenza ntoni? kodwa bekungenje, qha undixelele ukuba ndibuye ngengomso ndizothetha ndizole ngakumbi. Ukusika ibali elifutshane, ndiza kukuxelela ukuba undimemile endlwini yakhe kwaye ndinokubabona abantwana bakhe (3) kwiibhedi zabo ezazikwigumbi elinye kwaye xa wayendisa kowabo, (endleleni wandixelela ukuba ufuna ukuthatha kwaye uyavuma) bendicinga ukuba umyeni wakhe akekho; Kodwa ndafika ndambona !!, ndandilele ebedin iKing Size ndilele yonke, wandixelela ukuba wafika enxilile njengesihogo kwaye akazukuvuka kude kube lolunye usuku emva kwemini, ngalo mzuzu andizange ndivuse Uyazi ukuba enze ntoni kwaye ndiyacinga ukuba ububonile ubuso bam bokuthandabuza kodwa engaziyekelanga isandla sam wahlala ecaleni kwebhedi, wanditsala kancinci wandithatha ngebhanti, wehlisa ukuvalwa kwebhlukhwe yam, Ndikhuphe iqhude lam ngesantya esingazange sindinike ixesha lokususa nantoni na entlokweni yam kwaye waqala ngebhulukhwe ebabazekayo !!, Ndicinga ukuba uyenzile ukuziphindezela kodwa ngalo mzuzu andinakujikeleza naziphi na iingcinga ngaphandle kokwenza loo Bitch njengoko bendifuna kwaye amaxesha amaninzi kangangoko ndinako, sigqibe ukuyenza kuzo zonke iindawo anokundifundisa zona (ndingatsho ukuba wayengutitshala wam kwezesondo) kwaye ejija ngoluhlobo! nomyeni ecaleni. Ndifunga ukuba kuyinyani. Alithandabuzeki elokuba abasetyhini zezona zinto zihenyukazi nezona zishushu emhlabeni, kuphela ukuba kukho abo banxungupheleyo, barhoxile kwaye bacinezelwe kwaye abo banika inkululeko yabo inkululeko (kuwo onke amanqanaba) ezesondo, ezentlalo, iimvakalelo, njl. . ngokufutshane ukuba ngokwabo.
Ndichithe malunga neminyaka esi-7 ndingumthandi wakhe kwaye wayetshatile kuba amava awafumeneyo nomyeni wakhe wayewonwabela nam, saye safumana nezesondo zemiboniso bhanyabhanya yamanyala awayeyinxibile.
kulungile okwangoku, ndiyathemba ukuba unethamsanqa ngokuphumelela kwakho "utshatile onesidima"
Kulungile bantu abancinci, ndiyawaxabisa amava enu, izakundinceda kakhulu.
Kwaye ukuba uyandivumela, ukuba kunye nomnye umntu ngaphandle komfazi wam, nantoni na inokwenzeka, kodwa eyona nto ndingayifuniyo kukuthandana nale ntombazana, nokuba iyazingelwa okanye ayitshatanga,
Ewe apho uya kundinika uluvo lwakho, ngendlela elungileyo kakhulu kwaye ichanekile,
samantha jones sitsho
Mholweni. Ndingumfazi otshatileyo ndinomthandi omncinci kunam ngeminyaka eyi-10.Xa ndidibana naye, ndatsalwa bubuntu bakhe obumnandi nobunentloni. ekuqhubekeni kwexesha waba ngumntu otyhafileyo oye wahamba nam kwaye endothuka kuqala ndaza ndanconywa kamva (Ndingu-49 no-40), bendihlala ndiphila ubomi obuzinikele emsebenzini, ekhaya, abantwana, umyeni, njl. Ke xa oku kusenzeka bendinobusuku obuninzi bokuvuka kunye nesazela kuba kwicala lam bekungacetywanga. Ewe, uzinikele kakhulu, uyindoda ehloniphayo kwaye ngaphezu kwako konke uzinikele kakhulu kwimibuzo
ngokwasemoyeni (inxenye yayo ibikukuguquko okupheleleyo njalo njalo) kodwa siyenzile kwaye andazi ukuba sikweyiphi indawo: a) utshatile, uyazincama kwaye ngaphezu kwako konke uthembekile kwaye awonwabanga kwaphela
b) okanye ukuba naye (apho ndiqinisekile ukuba ndiya kwenza ukuba abo bandithandayo bangonwabi). .. yintoni enye into endinokukuxelela yona… ..
Phendula uSamantha Jones
UJuan Moreno sitsho
ps …………… Ndizamile kwaye elo qhinga liyonwabisa ukuba liyasebenza
ngoku sinobudlelwane obuhle ngokufihlakeleyo kuba ngelishwa utshatile….
kodwa ndingoyena mhlobo wakhe usenyongweni kwaye ndinamalungelo amaninzi
Phendula u juan moreno
Iposti yangaphambili endiyithumileyo ayingenanga.
Sukwenza into ongathandi ukuba bayenze kuwe, bacinga ukuba abafazi abatshatileyo balula ngenxa yokusilela kwabo kunokuba becinga ukuba banako, kodwa kungekudala yonke into iyahlawulwa okanye ibuyiswe kwaye kukho inkumbulo yomkhuhlane kuphela. ... ... uninzi lwabasetyhini kwaye ke bambalwa amadoda angaboyisa endaweni yokucinga ngabafazi abatshatileyo, khangela abafazi abangatshatanga kwaye babe noburharha kwaye ungabeki ububhanxa entlokweni yabo ... ayikufanelanga lowo uthathe isigqibo Ukutshata yinto kodwa khumbula indlela ojonga ngayo ukutshata emva kwethuba kuyisebenzela eyakho kwaye abayi kufuna …………
Ndizamile ukuqhubeka nokunika ingxelo ngamava am, kodwa awangeni.
Andazi ukuba amava am yeyona imbi kunazo zonke. Ndathandana nendoda ekwiminyaka engama-60 kwaye umyeni wam umdala kum kuneminyaka engama-20. Into eyenzekayo, yathatha indoda eneminyaka engama-60 ubudala iminyaka emi-2 ukuthandana kwaye ndamkholelwa. Kodwa wathi akufumanisa umyeni wam, wandigxeka ngayo yonke into. Kwadlula iinyanga ezimbini wandixelela ukuba umyeni wam uyaxoka, ndiye ndathatha ke umsebenzi wokuzifumanela. Kwithuba lesibini naye wandityhola, yeka ubugwala! Inyani yile yokuba intliziyo yam ijike njengelitye indlela yokuthemba umntu kwakhona. Inyani yile yokuba kukhona into eyaphukileyo emtshatweni wam, nokuba kukuthenjwa okanye uthando. Kodwa eyona nto imbi kakhulu kukuba ndisacinga ngale ndoda ngaphandle kokuyifumana. Umyeni wam ufuna siqale kwangoko. Ndiyabulela kuThixo, ngokungafaniyo nenqaku andingomfazi olula ukulala nendoda, nokuba ndiyamfela.
Ongaziwayo 2 sitsho
Ndicinga ukuba umxholo esijongana nawo awuziphathi kakuhle okanye ukuba into esiyenzayo ilungile okanye ayilunganga, imalunga namava kwimicimbi yokulukuhla, ixesha.
Phendula kuMntu Ongaziwayo 2
Ngokuhambelana noko kwatshiwo nguJaime ngoMatshi 1, kubaluleke kakhulu ukwenza izinto zicace kwasekuqaleni. Ngokwesiqhelo, akukho mntu ufuna ukuqhawula umtshato osekiweyo. Ngaphandle koku, nabani na ofuna kwaye angabeka emngciphekweni, kwelinye icala kukhulu, ukuba ibali lifunyenwe, uyazi ukuba ikwanemvakalelo.
Ukuqhubeka namava endiqale ukuwaxelela kwithuba elidlulileyo, endikhe ndakufumana kule minyaka mine icacile kwaye ibalulekile.
Fika kwinqanaba: Ndiza kubalisa ukudibana kwam okokuqala ndedwa nesoka lam lokuqala, endiza kulibiza apha ngokuthi "Nacho."
Emva kwentlanganiso yethu emangalisayo ekuvukeni, ndichithe iintsuku ezininzi ndicinga ngayo kwaye imvakalelo yam yokuqala yenzondo kunye nentiyo yaguqulwa yaba ngumnqweno kunye nomnqweno. Ukuziva ndinqweneleka kuye kwandondla kakhulu "i-ego" yam kunye neminqweno yentlanganiso. Ngaphandle kokuthetha, wayeligcina eli phetshana kunye nefowuni yakhe. Emva kweentsuku ezili-15 ndaye ndagqiba kwelokuba nditsalele umnxeba umnxeba kwaye ndicebise intlanganiso yokutshintsha umbono. Xa ndiphendula umnxeba wam ndiye ndamqaphela ukuba woyika kodwa wonwabile yintlanganiso. Ngaphandle kokuqhubela phambili ndamxelela ukuba xa esiza kwisixeko sam.
Ngokuzenzekelayo kwesi sixeko umntakwethu uneflethi yehlobo umyeni wam amjongileyo. Ndicebise ukubanakho ukuhlangana kuyo, umbono obonakala ubalasele kuye kuba sisakhiwo esikhulu kodwa ekungekho mntu waziyo.
UNacho wandixelela ukuba uzokundwendwela umama wakhe iintsuku ezi-7 kwaye xa efika uzakundazisa.
Le veki yokulinda yayindimele kukungonwabi kuxubene nomnqweno wentlanganiso.
emva kweentsuku ezisi-7 ndifumana umnxeba (kusasa), ndiyabonisa ukuba umyeni wam usebenza kusasa nam emva kwemini.
Siye salungiselela ukudibana ngengomso ngo 10 ekuseni, bendizakumlinda phantsi azobetha intsimbi.
Akufuneki ukuba, xa kukhala intsimbi intliziyo yam yaxhuma.
Ndavula nje. Uhlobo LwegumbiIndlu yonke / iflethi Sibulisana ngokusanga okubini ezidleleni. Sakuba sihleli kwigumbi lokuhlala, ndamxelela ukuba ndiyamangaliswa sisicelo sakhe kodwa ndiyabulela ukunyaniseka kwakhe kunye nomnqweno wakhe kwaye ndizimisele kwaye ndifuna ukuzama, kodwa phantsi komqathango wokuba kwakungekho ntabatheko okanye nantoni na enje. kwaye ezo ntlanganiso ziya kuba kuphela xa sobabini siziva ngathi kwaye nakwiimeko esizifunayo sobabini. Ndimxelele ukuba ndivuswe ngumnqweno wokuba ngumnini wayo kuba khange yenzeke ngelo xesha. Ibibonakala ifanelekile kuye kwaye ngaphandle kokuqhubeka nangokwemvelo kwaye kwangaxeshanye uye wasibamba ngobunono isandla sam wasibeka kubhabho lwakhe; umphefumlo wam ubanjiwe. ngokuthe ngcembe waqala ukukhokela kuye ephulula iphakheji yakhe ingekho nzima kangako. Ndikhuthazekile njengoko kungenakuba ngenye indlela. Ndimele nditsho ukuba akukho mfazi, utshatile okanye akatshatanga, okanye umhlolokazi onokumelana ne-caress yelungu ngebhulukhwe. Ngamaxesha ivolumu kunye ne-turgor zazinyuka. Ngomzuzwana othile, wakhupha i-phallus esele imile kwaye inamandla kwaye mna, sele ndimangalisiwe, ndaqala ukuphulula kwaye ndayihlikihla ekuqaleni ngobulali obukhulu kunye nenkathalo.
IBS BUTTON IYASEBENZA KUM
UAnonimo 2 sitsho
Ilungele uPatri, into esiyifunayo zizimvo kwaye umntu wasetyhini unakho ukufaka isandla.
Emva komzuzwana ndacebisa ukuba andilinde kwigumbi lokulala, ukuba ndiye kwigumbi lokuhlambela. Xa ndihamba ngokudibanisa ndamfumana ehleli emaphethelweni ebhedi kwaye ephethe ibhokisi yakhe!. Ndalala phakathi kwamashiti ndacebisa ukuba naye enze njalo. Ngaphandle kokuqhubela phambili, waqala wandiphulula kamnandi isisu namabele. Ngaphandle kokuqhubekeka okanye ukuphawula ndakhulula ibra yam ndahlala kwipanty. Ndimele nditsho ukuba ndinamabele amakhulu kwaye amahle. Ndamxelela ukuba andiphathe kakuhle kuba ndinobuntununtunu.
Ndiziyekile ndenziwe ngaphandle kokubuyisa. Weva ibrashi yelungu lakhe elinamandla ngezambatho zangaphantsi. Okwangoku ndandisele ndivukile kwaye ndibona indlela ubufazi bam obumanzi ngayo. Uye wandiphuza entanyeni nasemilebeni. Njengoko sasijongane kwindawo ethe tyaba, indawo yayisihle kuthi. Imincili yakhe yayinkulu. Ekugqibeleni ukhulule iifutshane zakhe ndaza ndakhulula ndanxiba ipanty yam, ndiphumza kamnandi i-glans ekungeneni kwelungu lobufazi bam. Kuqala wazisa iiglans ezifakwe kukukhuhlana kunye nokuyichukumisa kwi-clitoris yam. Ndikhumbule ngokucacileyo ubungakanani kunye nokumila kweqhude lakhe elinamandla, kuba nangona singazange senze uthando, wayekhe wamana ephulula amalungu esini izihlandlo ezininzi kwaye ndandimazi cm. ukuya kwi-cm.
Ngokuthe ngcembe, ukungena kungena nzulu; Ndiqaphele okokuqala ukuba ilungu elinamandla nelinamandla lindihlasele ngobunono kodwa kwangaxeshanye ngokugqibeleleyo. Okumangalisayo kukuba, xa ndaziva yonke i-phallus ebambekayo ingcwatyelwe ngaphakathi kwam, ndaziva ngathi ndithotyiwe okwesibini.
Kumnandi ukufunda kunye nokwabelana ngamava ngakumbi xa ebhalwe kakuhle. Ilungele uPatri.
Molweni, ndithandana kakhulu nomfazi otshatileyo onabantwana kwaye singontanga
unam kuba uziva ulunge kakhulu xa enam, ndiyitsho kuba undixelele
Kwenzeka ukuba ubudlelwane bakhe nomyeni wakhe yinto yombulelo, kwimbono yam
Undixelela ukuba akanakumshiya ngenxa yokuba emenzele izinto ezininzi ezintle kwaye wanceda kwizinto ezininzi, kodwa njengokuba wayitshintsha indlela yakhe yokuphila, akasamthandi, kwaye eyona ngxaki inkulu kukuba akazange abenayo i-orgasm kunye naye, kwaye kunye nam ewe, ukuba ndiyamenza azive ngathi ungumfazi, kwaye ukuba uyafuna ukuba nam, icebo elilungileyo kum ngefavi
j iimoto sitsho
INQAKU ELIQHELEKILEYO, UKUKHULA KUNYE NOKUTHETHA NGOKWENGQONDO, YIMPEMBELELO YOKWENZA IZIMVO KUMNTU KUPHELA UKUBA BAQAPHELE KAKHULU APHO BANIKELA INYATHELO ELIBI ,,,,,,, ULALE, mfundi olungileyo wakusasa
Ngexesha elithile eladlulayo ndathandana nomntu otshatileyo kwaye ekuqaleni wathetha kakuhle nam kodwa emva kwenkcukacha ndayeka ukuyenza ndiyakholelwa kuye kwaye kuthando lwakhe ndiya kuye ngenxa yokushiya yonke into ngenxa yokubandezeleka kwam ndiyazi ukuba luthando kuba sele luhleli ixesha elide kwaye andamkelanga namnye umthandi kuba ngalo lonke ixesha ndicinga ngaye, unelona gama lihle likhoyo ngu: Cecilia.
umlo omncinci sitsho
Molweni, ndathandana nomhazala wam ongusisi womfazi wam, uneminyaka engama-20 ubudala kwaye unentombazana enonyaka -1 ubudala nam ndineminyaka engama-33, sele ndithatha inyathelo lokuqala, ndidlala iziqhulo yena no-asta beza ukuzanga izandla zakhe kodwa uyithatha njengesiqhulo Kwaye akukho nto yimbi, yintoni enye endinokuyenza ukuze ndimse ekugqibeleni? Umyeni wakhe usebenza kakhulu kodwa ndiyabona ukuba umhoyile engekho ukuthanda kwam kodwa kuyinyani kwaye andihleki kodwa ndiyamhlekisa
BAYOKUSIKA AMAQANDLA NGOKUSHISA KUNYE NAKHO IIMPAWU, AKUKUNIKI IZINTO, NGENXA YOKUBA BAYOKUGQIBELA BAFE BAYAFELA, ABONI. KWIIMEKO ABAZI UKUBA BAMXABISE NJANI UMlingane WABO, UKUBA NGOKWENYANISO BAQONDA UMlingane WABO, BABENGAYI KUHAMBA BECINGA NGOKUNQWENELA OKO KUNGABONIYO. IBHOLA YAMANQAKU KANYE NEMITHAMBO, ZENZELELE NGOKUQINISEKILEYO KANYE AYISAYI KUBANGELA UKUBANDEZELEKA KULABO ABANGAKUFANELEKILEYO, KODWA BAZIBEKELA INGQONDO KAKHULU, UKUBA BAKHOLELWA BAKHULULEKA KAKHULU, BANGABONI!
Uzolile sana ndikholelwe ukuba uthando yeyona nto inqabileyo ikhona
Ngubani oza kuthandana naye nokuba ungazama yonke into
Awunako ukumkhupha engqondweni yakho yile nto ndikuxelela yona kuba
Malunga neminyaka emi-4 eyadlulayo ndadibana naye nangenxa yokuhlonipha iqabane lam
Zange khe ndithethe naye kwaye namhlanje ndimfuna ngaphezu kobomi bam.
Ndiyathemba ukuba iyakunceda.
Sithini isithuba, kutheni ungabeki ukuba ube ngumntu onobuqhetseba, oxokayo, onoburharha, ozikhukhumalisayo, okhohlakeleyo noxokayo? Esi sithuba sibonisa ukungathembeki kakuhle, kwaye lowo uwa kwiinethiwekhi zabo, engenanto, ethe tyaba, engakhulanga, abantu abalinganiselweyo, kwaye, kakhulu, uhanahaniso kunye nokugxeka. Yintoni ekufuneka ifundwe…
URamon, thatha umfanekiso kunye neqhude lakho lilukhuni kakhulu, bhala ngasemva ukuba uza kuziphosa kane njenge-bitch kwaye uthandane, beka ifoto kwimvulophu kwaye uyinike yena buqu, kunye nombala obomvu kwaye igama elithi "ndiyakuthanda" lithambe kakhulu endlebeni yakhe, kwaye ndimbuza ukuba abe nekofu okanye isidlo sasemini; Ngokukhawuleza uhamba ngoncumo kwaye xa uphuma emsebenzini yeyakho, ndiyakuqinisekisa ukuba uyamtyisa okumnandi kakhulu ngomhla wedibano, kodwa ke kuya kufuneka unyamezele phakathi kothuli nothuli incoko aza kuyenza. Ukukhupha malunga nobomi bakhe obungonwabisiyo kummelwane wendoda yakhe, khona apho kufuneka umamele, kwaye uhlala umnika isizathu kwaye ube negalelo ngezimvo ezinobundlobongela ngokuchasene nomyeni wakhe osele eyinkukhu, uhlala unika uluvo lwakho, ungaze ucebise; Ngelixa umphulaphuleyo kuya kufuneka uzame ukumfudumeza kwakhona, endlebeni kwaye uthe cwaka, ngelixa uncamisa isikhumba sakhe njengomntwana, umsebezela ukuba uziva ulungile naye, ukuba umyeni wakhe akanambulelo ngokungamxabisi ngokwaneleyo, unethamsanqa lokuba unayo ezingalweni zakho, ect, ect., Apho uyayeka ukukuxelela ngobomi bakhe kwaye afudumise intloko yakho, kwaye uya kuzinikezela kukuncamisa kwaye atyebe iqhude lakho, lixesha lokuba ukuba akutyise ngendlela abangazange bayenze ebomini bakho, ngoku ungazisiki ngakumbi kwaye uyikhuphe indoda yakho yenkanuko, umncancise ngokungabinangqondo, faka iqhude lakho emlonyeni wakhe umxelele ukuba akujonge emehlweni ukuze akwazi jonga ukuba wonwabele njani, kuya kufuneka umgeze ngamathuba okothuka kunye nobumnandi, uthambe kwaye ukhawuleze, athandane kwaye abe noloyiko, umenze onwabe njengondindwa, umbeke kane aze abethe iimpundu zakhe, i-cavalgala njengehashe, uyamtsala ngeenwele kwaye ujonge imilebe yakhe, uthetha izinto ezigwenxa endlebeni yakhe, ekugqibeleni xaval, ndiyakubona uyinto encinci xa unayo, kodwa ungalibali nanye into, ukuba uyayifumana uyakuba ne-org Asichazeki, kodwa iingxaki nazo ziya kuqala, zixabise xaval kwaye ungangeni kwiihempe zeentonga ezilishumi elinanye, andikuboni ulunge kakhulu ukujongana nalo mfazi, ulumke.
Oku kuphendula ibali likaRamon
luis, musa ukuba ngumntu ophambeneyo ... ngokuqinisekileyo ubunezinto ezininzi zobunono kunye nehorizons ebanzi, inqanaba lokuziphatha okuhle kunye namandla agqwesileyo ezesondo, wawuthe ngqo kwaye awuzange usilele nenyaniso, uzele kakuhle ... ngokufutshane, ipakethe yomntu yokulunga; kodwa ndiyoyika ukuba umfazi wakho khange alandele ekuvukeni kwakho kwaye endaweni yoko uyinto efana nale uyichazayo kwimigca emibini yokugqibela yentetho yakho, oko kukuthi, "lixhoba" lomntu onamava nesigulana esingakholwayo. Kwaye uvuka kwilimbo yamantshontsho.
Hlisa umoya ukuba uLuisito uza kudlula kungekudala, ngubani owaziyo ukuba ngenye imini awuyi kuba ngumkhohlisi wepostin? abanye bayalandela eBabia.ukubabona besiza, ke yehlisa umoya kwaye wonwabe, phumla ndoda, unamathuba amaninzi okuba nexesha elimnandi, unento kwaye uphinde uncume, kwaye ube yindoda eyokhakhayi ngakumbi.
Uninzi lwenu lusuka kude kumxholo weposti, apha sithetha ngendlela yokurhwebesha umfazi otshatileyo, hayi malunga neengxaki zobuqu ngokunzulu, masilinganise iposti kuloo mbuzo, kwaye wonke umntu olapha unezimvo zabanye nabanye Siza kuphuma nesibonelelo esithile, le yintetho yendlela yokuphucula amaqhinga ethu namava axeliweyo, kwaye uncede abanye ekuthandabuzeni, okanye uthathe inyathelo lokuqala, baninzi abantu abaziphethe kakuhle, abanogonyamelo abacaphukisayo, kunye nekaffirs, kukho izithuba ezingenakubalwa zabantu abanjengabo
AmaTaliban. 22 sitsho
Ndiza kubeka le ngcebiso ilungileyo ukuba isebenze, umfazi otshatileyo uyandonwabisa, kodwa akaze andixelele nantoni na, kuzokusa kwaye siza kubona ..
Phendula kwiTaliban. 22
Luis e sitsho
Ndiyaphambana ngumfazi otshatileyo, wohlukana kodwa ngoku ubuyile nendoda yakhe ngezizathu zoqoqosho, ndingamgcina njani ukuba andinamali, ukuba ungandicebisa, ndiyayixabisa ..
Phendula u luis e
Ingcebiso elungileyo kuba ngokwendalo ndifunwa ngabafazi abatshatileyo okanye ngamakhwenkwe kwaye oku kundinceda ngakumbi ukuba ndikhethe ngcono ngexesha lokulukuhla
Ngaphandle kwayo yonke into, ndicinga ukuba eyona nto intle kukubonisa Ukuhlala ujikeleze imini yonke kunye nomntu obhinqileyo yinkcitho elusizi yexesha.
Zininzi iindlela zokuxelela intombazana ukuba siyayithanda, kwaye imeko leyo ayivumeli mntu ukuba aqumbe. Amagqabantshintshi alula kwisitayile esithi "Ngale nto ndikuthanda ngayo kum, ...!" yenziwe esidlangalaleni, inokwenza kube lula kakhulu kuye ukwazi ukuba yintoni esengqondweni yethu. Nje ukuba sigqibe, kufuneka silinde kwaye sibone indlela abasabela ngayo.
Ukuba umfazi uyazi into esiyithandayo, uyasikhulula kwangoko kwaye adlulisele ukungathandabuzeki kunye noloyiko kuye.
Thina, ukusukela ngoko ukuya kuba nobuhlobo, uncumo, wink ... njl
Nangona ndingumfazi, ndiyathanda ukujonga le foram amaxesha ngamaxesha kwaye ndibone ubuqili kunye nezicwangciso zamadoda xa kufikwa ekuphumeleleni.
Inyaniso yeyokuba uza kumgama oziimayile kwaye amava endiza kuwabalisa eza ngokusondeleyo ngokuhambelana noko kukhankanywa nguRamón; Kuya kufuneka ubonakalise ngokwakho, uqaphele ngendlela efihlakeleyo kwaye wazi ukuba ulinde njani.
Amava am abuyela umva ngaphezu kweminyaka emibini. Nabani na ojonge iikhomenti sele eyazi i-nik yam evela «Patri».
Nditshatile kwaye ndinengqondo evulekileyo (iminyaka eliqela ngoku).
Ndizithanda kakhulu iimpahla, ndinxiba kakuhle kwaye bandithatha njengonobuhle nomtsalane (Nangona ndingakuthandi ukucaphukisa konke konke).
Ndihlala ndisiya kwivenkile edumileyo yokuthenga nokuthenga iimpahla.
Ngokucacileyo, abaqeshwa nabaphathi sele bendazi, nangona ndingazi mntu.
Ngesinye isihlandlo umphathi wezityalo (osoloko enxibe ibhatyi kwaye enomtsalane kwaye enobudlova, omncinci kancinci kunam, weza kwisicelo sam sokundazisa ngomgangatho wengubo. Umyeni wam wayekhona kodwa enganikeli ngqalelo okwangoku yokundibonisa umgangatho wengubo esasiyiphethe sobabini, wandibamba ngesandla, wasicofa kakuhle.Wandishiya kwisiqwenga esinye.Ndiqaphele indlela awayengcangcazela ngayo ngenxa yokungakwazi kwakhe ukuqonda.Andimxelelanga umyeni wam ngengozi thintela iingxaki ezingeyomfuneko.
Ukusukela ngoko uye wachaneka nam, kodwa qho xa ndisiya e mall bendihlala ndibona ukuba bendinovalo kwaye ndiqhubeka ndibuyela emva naphambili. Wayesoloko endibulisa ngobulumko kwaye ndimphendula ngokuchanekileyo; ndiyakuthanda oku ngaphezulu konyaka ...
Molo Patri, ndizifundile iikhomenti kunye namabali akho kwisithuba seenyanga ezimbalwa kwaye ndiye ndaqonda ukuba ndinomdla wokudibana nawe kwaye akuyomfuneko ukuba kube ngokobuqu, kungale ndlela yokuba kungafani nomntu nayiphi na enye into engavumi ukuba sibonane.amehlo ngelixa sithethayo ndilindele impendulo kwicandelo lakho nokuba alilunganga
Ndisebenzise ithuba lokuba ndineentsasa zasimahla, ndifuna ukuqhubeka nokukhumbula amava. Inyani yile yokuba ndiyifumana iyonwabisa, ndigxile kuyo.
Kule mihla ndinayo, masithi, ubudlelwane beendlela ezintathu (umyeni wam, isoka lam langaphambili kunye nomphathi wezityalo wevenkile yokuthenga endiza kuthi "nguJuan" apha). Inyani yile yokuba umonde kunye nokuqonda akubonisileyo kuphele kundithimba kwaye kwandisela ukuzithemba kwam. Ngenye intsasa kungekudala emva kwexesha lokuvula ndahamba ndaya e mall. Wayesoloko ejongene nokujikeleza isityalo okanye kwindawo yeofisi. Ndichithe ixesha lam ndijonga iimpahla ngendlela ephazamisayo. Emva komzuzwana ndambona, ehlala enxibe kakuhle, ecocekile, kwaye eyindoda. Ndijongile ndibanga ingqalelo yakhe; Ukuziguqula wayenelokhwe ezandleni zakhe ngelo xesha. Uthe xa esondela ndamxelela ngqo. "Molo Juan, kudala sibonana kwaye ndiyazi ukuba ufuna ukudibana nam, nam, jonga, ngena kwigumbi lokuqala elifanelekileyo undilinde, ndiza kubuya umzuzwana." Iziphumo zamagama am zazintle kakhulu. Uvule amehlo akhe ndaqaphela indlela abafundi bakhe abahlanjululwe ngayo. Waqala ukungingiza: "Kulungile, ndiya phaya, akukho mntu uhlala engena ngeli xesha."
Ewe bendisazi ukuba into yokuqala ekuseni bambalwa abathengi kwaye abasebenzi bahlela iimpahla. Ndambona ngokufihlakeleyo engena kwigumbi elifanelekileyo; Ndithe chu ndathatha enye ilokhwe emva kwethutyana ndathi chu ukuya kwigumbi elingena impahla. Bekukho amagumbi okutshintsha mahlanu, ndiye ndathi chuu kancinci ndamisa umqala kwangoko ndabona ukuba ucango lokugqibela luhamba njani, ndingakhange ndicinge ngale nto ndingene kuyo, ndaxhoma iilokhwe kwirakhi yedyasi; yena xa evala i-latch. Ngaphandle kokuqhubela phambili kwaye ndingakhange ndithethe nto, ndiye ndaqala ukuphulula ilungu lakhe ngebhulukhwe yakhe ...
Ewe, bendinomfazi otshatileyo kodwa kwahlala iintsuku ezi-5 kuba yayiyingxoxo kuphela xa sasiza kubona umyeni efunda yonke imiyalezo ukuba ikaka iyinyani uneminyaka engama-24 ubudala kwaye ndine-16 elungileyo mdala kancinci ndiyinyani
Mhlawumbi inokumangalisa abanye benu ukuba umntu obhinqileyo angagcina ubudlelwane beendlela ezintathu kwaye agcine ulungelelwano. Inkcazo ukwahlula uthando kwisini. Indoda ibisoloko ithathwa njengenayo le khono: ukwahlula isondo nothando. "Imfihlo" mayicace gca kubudlelwane hayi uxoke. Kwimeko yam, andikhange ndikhangele nantoni na ngokuthe ngqo kwaye ndikwazile ukwenza izinto zicace. Ndiyamthanda umyeni wam, inyani kukuba akukho namnye kuthi onomona, kodwa nangona siqhuba kakuhle ngokwesondo, ayindigqibi. Ubudlelwane obunqabileyo endinabo kunye nabanye ababini abanabo kwaye basebenza njengesixhasi sesondo. Baninzi kwaye baninzi abangavumelaniyo, kodwa ndiyakuqinisekisa ukuba ukubanazo kunye nokucacisa ngokucacileyo iinjongo, izinto zinokusebenza kakuhle. Kodwa lumka! Ukuqonda kubalulekile kwaye ugcine engqondweni ubungozi obukhulu bale nto masiyibize, ndidlala ngomlilo. Oku kwenzelwe kuphela abantu abanesibindi nababandayo. Ngenye imini ndiza kuqhubeka nokususa amava am endicinga ukuba anganomdla kwaye aluncedo.
Emva kokufunda "enkosi" yakho, andiyiboni into yokuba nobudlelwane kwaye ndiyifumene inesibindi esithi "uyayithanda indoda yakho", kwaye anditsho oku nomntu ozolileyo okanye oziphethe kakuhle, kuba ngelixa Andingatshatanga ... kwiChilean elungileyo bendilunge kakhulu kwi-webeo, ndihlala ndicacile ukuba ndinazo izinto ezicacileyo nomnye umntu (abantu) ... kodwa ndinolwalamano, andikaze ndingathembeki ... yintoni inqaku lokwakha ubudlelwane nomnye umntu, ukuba uza kuqhubeka nokuba nabanye? ... »Inyaniso akukho namnye kuthi onomona» ... uqinisekile ngalonto? ngokuqinisekileyo utsho ngoba awusekho endaweni yomyeni wakho, ekubeni uyinkuku.
Ndiqinisekile ukuba njengawe, iipesenti ezingama-99 zabo baye baliphendula eli nqaku baxakeke yingqondo kangangokuba akwenzeki kubo ukuba bacinge ngendlela ekuya kuba yiyo kwelinye icala, ukuba yindoda.
Kwelinye icala, emva kokufunda amagqabantshintshi avela kubafana abafuna ukusebenzisa gwenxa ulwazi olunikezwe kwinqaku; Ukufuna ukuyisebenzisa kuphela "ukuthatha umfazi otshatileyo alale" okanye "ukuyenza loo mbongolo incinci ibe yeyabo" okanye abantu abadala abafuna konke ukutya umfazi omncinci ... ndinentloni kwaye ndinomsindo, ukuba kukho inkunkuma yendoda yalaa mfo, enganikeli buhlungu malunga neemvakalelo zomnye umntu kwaye angayichazi eyokuba bonakalisa ubudlelwane nje ngenxa yokuzingca "kokubamba iqhina." Ukwenza umbono ombi kuwo onke amanye amadoda athandana ngokwenene nomntu otshatileyo kwaye abanomdla wokwenene ekumonwabiseni nasekumnikeni uthando, uthando kunye nokhuseleko olufanelwe "ngumfazi olungileyo".
Njengomboniso, ungaze uthathe iqabane lakho ngokungakhathali, akukho mntu ungumnini wakhe nabani na ... iqabane lethu linathi kuba limthanda, kuba iyayithanda inkampani yethu ... kwaye kuxhomekeke kuthi kuphela ukuyigcina injalo ; ukoyisa umntu akupheli xa usayina iphepha okanye unomntwana, ngumsebenzi oqhubekayo nongumaxesha athile, njengokuphefumla okanye ukutya. Ekuphela kwento ekhethekileyo enokuthi izithandani ezibini zinokunika amaqabane abo kwaye akukho namnye umntu onokubanika yona, kukuphela kwemizimba yabo ... ukuba abakwazi ukuyinyamekela kwaye bayihloniphe ... abafanelekanga ube nobudlelwane
Patri, emva kokufunda "enkosi" yakho, andiyiboni inqaku lokuba nobudlelwane kwaye ndiyifumene inesibindi esithi "uyayithanda indoda yakho", kwaye anditsho le nomntu othuleyo okanye oziphethe kakuhle, ngoba ngexa ndingatshatanga ... kwiChilean elungileyo bendilunge kakhulu kwi-webeo, ndihlala ndicacile ukuba ndinazo izinto ezicacileyo nomnye umntu (abantu) ... kodwa ndinolwalamano, andikaze ndingathembeki ... yintoni Ngaba inqaku lokwakha ubudlelwane kunye nomnye umntu, ukuba uza kuqhubeka uhlala nabanye ?? ... »Inyaniso ayikho kuthi yomona» ... uqinisekile ngalonto? ngokuqinisekileyo utsho ngoba awusekho endaweni yomyeni wakho, ekubeni uyinkuku.
Njengoko yayiyinto yokuqala kusasa, igumbi elifanelekileyo lalizolile, ngenxa yoko sikwazile ukuzola ngakumbi. Kwangelo xesha wayephulula ilungu lakhe ngebhulukhwe yakhe, saqala sangana. Ngesiquphe sahlukana sakhulula iimpahla esinqeni ukuhla singakhange sithethe nelimdaka. Sibeka iimpahla erankini. Inyani yile yokuba nkqu nakwezona ziphupha zam zenyama bendinokucinga ngelungu elinamandla ngakumbi. Ubunzima bokwakhiwa kwavela kuye (kum olona mgangatho ubalaseleyo), ikwanobungqingqwa obubambekayo.
Okwangoku ndayibamba kancinci phallus ndaqala ukuziphulula okwam ibrashi: iklitorisi, imilebe engaphandle… kuyo yonke le nto wayendibambe ezimpundu. Ndimele nditsho ukuba sinokuphakama okufanayo (ngezithende ndimde kancinci). Kancinci kancinci ndaqala ukufaka ilungu kwilungu lobufazi ngokuhamba kancinci, okokuqala i-glans kwaye kancinci kancinci ... Ngesandla sam sasekunene ndibambe kwaye ndalathisa ukungena. Emva kwethutyana ndasusa isandla sam xa i-lubrication kunye ne-arousal zazilungile kwaye ndayeka ukuba ndibethelelwe ngokupheleleyo. Sahlala embindini wegumbi elifanelekileyo, ndeva ukubethwa kwe-phallus enamandla ngaphakathi kwam. Sele siqalise ukuhamba ngamandla kwepiston kunye nokuhamba ixesha elide. Ndikuthandile ukubanjiswa kwisiseko sebhalano ». Ngeli xesha lokuqala ndiye ndabona ukuba akanakufikelela kwi-orgasm ndamcela ukuba aphume ngaphandle. Kuba ukonwaba kwakhe nako kwakukukhulu, sakhawulezisa iintshukumo, inyani yayiphuma kancinci. Ngesiquphe lakhupha ilungu laza laxhuma ngokukhawuleza. Ndabukela, ndanomdla, jets ezintathu zencindi yobudoda eyaphuma yawa ezinyaweni zam. Khange ndiphawule nto, sanxiba ndavula I change room ukujonga ukuba akukho mntu na. Ngomyalelo wam, waphuma waza wandixelela: "ngoku ndiza kubuya." Ubuyile nelaphu apho aqokelele khona amadlozi. Ndiphume kuqala ndiphethe iilokhwe. Ndimkile. Umjikelo wokuqala bendiphumelele.
Igama lokuqala Harold lithetha ntoni? sitsho
NDIGCINA UMFAZI, NAYE UTSHATILE KODWA UNAMAKHOSIKAZI AMABINI, NDIQHELEKILEYO NGENDIMA KAPAPA, ANDAZI KODWA IJEKI LIQ QI KIERO NGAPHAMBILI QA UBOMI BAM KUMABHABHONASI.,.,. ,.,.,.
Imvelaphi yegama lokuqala Frank sitsho
INYANISO YETyala NDIFUNDE KUPHELA KWEZIMVO ZAKHO…. KANYE MANDIXELELE UKUBA KUNINIKA IZINTO EZININZI ZOKUBA UNGAWAZI ... ESEFUNGILE PHAMBI KUKATHIXO ... KANYE ASIZAMI UKUZE SIMOYISE…. UKUBA NDIBIZA IMITHETHO YEGOLIDE EBOMINI BAM… UNGAZE UKUJONGA UMFAZI OTSHATILEYO .. ZAMA UKUGCINA UMNTU OMKHULU NAKHO .. EBHAYIBHILINI IMO EYINGOZI IYAgxininiswa .. YINJENGE INDLEKA YOKUYA EKUXHELANISWENI… KWAMANYE AMAZWI KUKUFA… KUPHELA NGAMAGQABUZA AM ... KODWA NDIYAKUKHUMBULA UKUBA OKUBALULEKILEYO EBOMINI KUKUZAMA UKUSINDISA UMPHEFUMLO WETHU… UNGAYIYIBEKI NE SONO … NDINGUMONI NDIYASIVUMELA… KODWA KUKHO IMida: ... KUFUNEKA SIHLONELE… ..
Iipesenti ezingama-90 zabasetyhini abathembekanga, umntu obhinqileyo akaze athande uziva ngathi xa umntu ezinikezela ngokupheleleyo benza le nto bafuna ukuyenza, njengomgaqo jikelele, indoda iba liguevara ngasemva komfazi kodwa Ngokubanzi bayakhwaza bengathembekanga fuck kakhulu ...... naliphi na ibhinqa elitshatileyo eliyithandayo kwaye kokukhona besempilweni kakhulu kwaye bekhubekile kokungathembeki ngakumbi yi-vertdad ndineminyaka eyi-45 kwaye ndingumthandi wabasetyhini abangaphezulu kwama-30 abatshatileyo kwaye ngokwenyani Andifuni Bayandikhangela kwaye ndimbi andinabukho yiyo le nto ndingamthembi umfazi wam nangona ndingamkhweletisi kwaphela yiyo loo nto esithi andimthandi kodwa njengoko isitsho njalo intetho endala intonga yokulinganisa iya kulinganiswa ... ..nuynca ubabonise ukuba banomdla, yiba nobubele kubo kwaye ungaze ube krwada emfazini nokuba, okanye ulunge nje ubenze batyebe ungaze ubasuse kwaye ungabenzi ' myeke umntu ahambe.
Akukho mama ugezayo utata !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Enkosi kakhulu, ndiza kubeka kwaye ndiziqhelanise neengcebiso, ndiyathemba ukuba ndiphumelele, iya kuba lixesha lam lokuqala
Enkosi kubo bonke abathe babelana ngeengcebiso zabo kunye / okanye namava, elowo kuthi uya kubathatha njengeyona nto ifanelekileyo kuye kwaye siyisebenzise ngendlela efanayo. Imibuliso kubo bonke, ngakumbi uPatri.
Inyani yile yokuba yandinceda ukuba ndingalahli into endinayo ixesha elide, mfazi wam, kwaye njengoko ndihlala ndisitsho, awuyeki ukufunda.
Siyavuyisana kwaye ndiyabulela ngeengcebiso
Umntu endisebenza naye wayehlala endilukuhla, kodwa kuba ndandisele nditshatile andizange ndimhoye kwaye waqala wasuka kum, ngenye imini ndaqala ukumqaphela ndaza ndamlukuhla, ndandicinga ukuba akazokufuna kodwa ndothuka kuba wamkele kuba sele enomntu amkhhelayo, nangona endixelela ukuba akamthandi, inyani kukuba ndalala naye emva koko wandixelela ukuba eyona nto ayifunayo kukuba nomntwana kwaye ukuba akafuni. ukuya, akazukundikhangela kwakhona kwaye uzohlala njengomama ongatshatanga, ufuna kwakhona kwaye undixelele ukuba ndim okhethiweyo kwaye yiyo loo nto wandinika ubuntombi bakhe, andazi ukuba mandithini yenza kuba ndifuna ukulala naye kuba umzimba wakhe uyanditsala, kodwa andifuni enye into naye kwaye andazi ukuba ndithini kuye ngalento andicebisa ngayo yokuba ndimithe, ukuba Umntu angandinika iingcebiso kuba umzimba wakhe omkhulu undiqhubisile ndaphambana.
haha ukukhathalela ijermu !!!
Abagulayo menud @ s, ukungathembeki kunye nokungcatsha yeyona nto iphantsi ebantwini!
Umntu ofunda oku ndiyamthanda umazala wam kuba undinike izizathu zokumqaphela
Andinamfazi, ndihlala nabantwana bam (3) uyandinceda kakhulu kwaye ndiyayivuma; kodwa andazi ukuba ndingamxelela njani into endicinga ngayo ndisoyika ukuyinkcenkceshela kwaye ndiyithumele kude kakhulu.
eyona nto imbi kakhulu kukuba akasasaqhubeki nokundinceda njengoko ubona ………
ezinye iingcebiso xfis Ndiyabulela kuwe
umntu onamava akhe kwaye andicebise.
bye enkosi ndiyayixabisa
UGiancarlo Bautista sitsho
Ukoyisa umfazi otshatileyo yeyona nto ilula emhlabeni, okokuqala bonisa isimilo sakhe, ukuba oku kufundwa ngumfazi baya kuqonda ukuba yinto abayithandayo kakhulu, ukuba beza entlanganisweni okanye kwiqela lezihlobo, Mkhuphe uyokujayiva umbonise ukuba ulunge kangakanani, awukho, akukho mfazi unokumelana naloo nto, emva koko sondela kuye ngokungathi akukho mdla, kodwa sondela uthethe ngeengxaki zakhe umnike iingcebiso, amaxesha ngamaxesha ezinye iziqhulo. , ukuba uyakubamba umjongile kwaye voila uya kuzazisa kuwe ...
Ndihamba kathathu ndinabantwana ... kodwa oko kwaqala ngaphandle kokufuna ... ndiyayivuma, eyona nto ndingayaziyo, kukuba iya kuba ngamadoda abo ... bayakwenza okufanayo Ngubani owaziyo, kodwa akukho mntu unokukuhlutha yona.
Phendula kuGiancarlo Bautista
Molweni ndikwimeko ndingazazi nokuba mandithini, ndithini nicebisa? Ngumfazi onabantwana ababini, unomyeni olungileyo, usibali wam kwaye ndiyamthanda lomfazi kodwa andazi ukuba uyandithanda na kodwa sele ndijongile kwezinye iimpawu sakha sahlala kunye kwindlu enye kwaye ndingathanda ukuba naye njengoko ndenza ukuba naye kwaye ndiyazi ukuba ulala naye umyeni wakhe kwangaxeshanye kakuhle uyinto engakhathalelwanga endinokuyenza
Ewe, kule ingasentla ndincoma ukuba ufuna ukuthetha neli bhinqa malunga nemicimbi yobuqu kwaye ukusuka apho uqalise ukufumana imeko yakhe, eya kukuvumela ukuba uhlalutye amathuba akho. Ukuba ufumanisa ukuba unalo naliphi na ithuba kufuneka uhambe kancinci kwaye ekugqibeleni ndincoma ukufunda amagqabantshintshi angaphambili, ithamsanqa.
NDINENGXAKI… NDIYASITHANDA ISONKWA KODWA ASINGISI BHUTILI, NDENZA NTONI?
NDICELA UKUPHENDULA !!
Phendula utata wakho
Ndinemeko engqinelana nesihloko, ndiyamthanda umfazi otshatileyo, uneminyaka emalunga nama-35 ubudala nangaphantsi kodwa ndineminyaka eli-18 ubudala kwaye unabantwana abancinci abayi-2, umyeni ungomnye walamadoda ahlaselayo, uyazi. .. mncinci ndiyamvuma kodwa unobuso obuhle kakhulu, ukuza kuthi ga ngoku andazi nokuba ndenzeni, nokuba ndilinde iminyaka embalwa okanye ndihambe ndizonwabisa kwaye ndithatha umngcipheko ngexesha elinye, ndinayo Ndizamile ukuqhagamshela amehlo kwaye ngamanye amaxesha kuye kwasebenza kwaye ndimjongile ngakumbi.Kodwa, ukuze ndingaziboni ndicace gca, ndaphambukisa amehlo am emva kwemizuzwana embalwa, ngamanye amaxesha yena, njengommelwane wam, ndiyabona ukuba ushiya indlu yakhe kwaye ukuba ndingaphandle, nam, kuba ndizamile ukuyifihla, ndingamjiki nokuba abone haha ​​esque ngaphezulu kwayo nantoni na ngamanye amaxesha ndiye ndoyike ukuba uzokuqonda ukuba ndiyamthanda kwaye ndiyahleka kum okanye kwinto ethile.
Kodwa nakwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo kukho into eyenzekileyo kwaye andazi ukuba yinto ebonisa ukuba uyayithanda: Ndandihleli ngaphandle nomhlobo kwaye, washiya indlu yakhe, inyani kukuba ngamanye amaxesha kuyinto eqhelekileyo ukubona abafazi abatshatileyo, ngebhulukhwe kakhulu.igango, iflops kunye nebhatyi ekhulule kakhulu kwaye neenwele zakhe zingcolile lol ngathi ubesandokuvuka kwaye ndiyakuxelela ukuba ebezophuma kodwa khange ambone umhlobo wam nam kuba ebezile ukuphuma ngentloko ejonge phantsi kwaye sele eqale Ukuhamba, wajonga phezulu (ngokungathi uya evenkileni okanye enye into elolo hlobo) wathi xa esijonga wajika wajika phantse xa engena endlwini yakhe ndajonga icala lakhe kwaye ndabona ukuba ngaphambi kokungena xa evula ucango wandijonga okomzuzwana emva koko wangena, mhlobo wam, njengoko ndimthemba, ndamxelela ukuba ndiyamthanda kwaye kwenzeka kakuhle kuthi ukuba mhlawumbi ungene ngoba ebendisola ukuba ndimbone enxibile, ngoba ukuba ebebuyile ngoba Uyilibele imali or aglo kuba uphuma kwangoko futhi kodwa akasazi Ndimoshile ngelo xesha, yiyo loo nto ndicinga ukuba inento yokwenza nokuba ndiyamtsala na.
Ngamafutshane, ndiyathemba ukuba andikhange ndizandise kakhulu kodwa ndingathanda uluvo lwakho kunye neengcebiso ezinamava.
Igalelo elihle kakhulu kuyakufuneka ndilisebenzise kuba ndiyamthanda umlobi apho ndisiya khona kusuku lokuqala wayendithanda kakhulu kwaye ndisathanda kakhulu !! Inyaniso iya kuba sisihlandlo sam sokuqala sokuba ndinolwalamano kunye nomfazi otshatileyo! kwangaxeshanye ndiziva ndingaqhelekanga kodwa ndiyathanda ukuziva ngathi! Andazi ukuba ndiyazichaza na! xa ekugqibeleni ehlamba iinwele zam, konke kuyabhabha xa edlula izandla !!! Unabantwana !!! Ndamxelela ukuba ndiyaphuma ngeempelaveki kwaye uyandixelela ukuba ufuna ukuphuma !! kodwa andazi ukuba kwenzekani kum andinabuganga bokumxelela ukuba siyaphuma !! Andazi ukuba ndimbona kuphela ngendlela yokuba asistylist sam hayi njengomhlobo !! Ndifuna iingcebiso !!!
lilianita aunk utshatile uyazi ukuba ndiyakuthanda kwaye ndizokuzama yonke into ukuze sikwazi ukuba kunye .. ndizokulinda ukuba akonelanga andazi ukuba ndenzeni ... libala wena andikwazi pikita ndiyakuthanda
Bahanahanisindini, anikuqondi na oko aniyalele kona uThixo kwasekuqalekeni xa uThixo wadala uAdam, wathi akulungile ukuba indoda ibe yodwa kwaye yadala umfazi ofanelekileyo kwaye wayixelela indoda ngenxa yohenyuzo indoda izakushiya utata nomama kwaye udibanise nenkosikazi yakhe.
wathi kuMNTU njengoMYALELO ONGCWELE WOKUFA awuyi kumnqwenela umfazi wommelwane wakho ...
Sifunda kangangoko sisezintlungwini… ..
Phendula EL ILUMINADO
wathi kuMNTU njengoMYALELO ONGCWELE NOKUFA awuyi kumnqwenela umfazi wommelwane wakho
UKUJONGA IJOTO JOTO
Ndingumfana otshatileyo kwaye okwangoku ndinomfazi wam kunye nabanye ababini kwaye abanye ababini batshatile kwaye eli nqaku likunika kuphela izimvo zokuzibandakanya, kodwa isikhokelo sokwenyani okanye sokulukuhla umfazi kukuba nguwe kwaye uhlala unyanisekile Inyaniso kwaye soze babenangxaki, ndibaxelele amaqabane am kwasekuqaleni nditshatile kwaye bobabini bayayazi kwaye ndineminyaka eli-12 ndikunye nabo abatshatileyo abathathu ukuba inkosikazi ayazi malunga nabanye kunye abanye abazi ngaphezu koMfazi akalunganga le ndiyenzayo kodwa ndiyabathanda kwaye bayandithanda nangona sitshatile sonke sihlala sincedana kuyo yonke into icace gca ngaphandle kokwazi ukuba sidibene kakuhle le yingongoma yam kwaye Ibali lam elincinci
Inyani yile yokuba ndizibonile zonke iikhomenti, ezinye zilungile kwaye ezinye zimbi ngokoluvo lwam, ndicinga ukuba umntu makangadibanisi nabantu abatshatileyo nokuba banomdla kwaye bazizityebi, ndizifundile ezinye zezimvo I-Patri yenza kwaye inyani kukuba yenza uburhabaxa okanye isifebe kwaye into ayithethayo bubuxoki obunyulu obundenza ndidubule amabali enoveli yesini okanye into efanayo, kodwa ekugqibeleni lelo lelinye ibali.
Ndingumoni kwaye ndiyazi ukuba ndiphosakele kodwa awuzigwebeli, mamela obu bungqina kwaye ungakhohlisi abafazi bakho okanye udibanise nabafazi abatshatileyo, kucocekile kwaye kulula ukuqonda, kwaye nindithandazise ukuze UTHIXO undixolele zonke izenzo zam ezingcolileyo.,
enkosi ngokundifunda nokuba abanye bandigwebe kakubi, enkosi
UTHANDAZO UMTHANDAZO ukupela ukucinga ngawe! Unokholo olukhulu! Funda esi sivakalisi ngononophelo kwaye wenze oko sikuxelela kona ngaphandle kokutyeshela amanyathelo ekucela ukuba uwenze, kuba kungenjalo uya kufumana iziphumo ezichaseneyo zento oyicelayo. Cinga ngomntu ofuna ukubanaye utsho igama lakhe kuwe izihlandlo ezi-3. Cinga malunga nento ofuna ukuba yenzeke kulo mntu kwiveki ezayo kwaye uphinde ngokwakho amaxesha ama-6. Ngoku cinga ngento oyifunayo naloo mntu kwaye uyithethe kube kanye. kwaye ngoku yithi .. Ray wokukhanya ndikubongoza ukuba umbe -igama lomntu- apho akhoyo okanye ekunye naye kwaye ndimenze andibize ngothando kwaye aguquke namhlanje. Gumba yonke into ethintela -igama lakhe- ukuba lize kum-igama lethu-. Bekela bucala bonke abo banegalelo kuthi bafudukele kude kwaye angacingi ngakumbi ngamanye amabhinqa kunokucinga nje ngam-igama lethu- Ukuba uyandibiza kwaye andithande. enkosi, enkosi ngamandla akho amangalisayo ahlala ezalisekisa oko kuceliweyo kuyo. Emva koko kuya kufuneka uthumele isivakalisi kathathu, kwiindawo ezintathu ezahlukeneyo.
Ndingamthatha njani umfazi womzala wam ndilale ndingakhange ndithethe nto kumzala wam ndifuna uncedo ungumakhelwane wam unomzimba omncinci ndimthumele iphepha elincinci ndimxelela ukuba wamkele iphepha kwaye akandiphendula. kwaye ngokucacileyo akazange abe nomsindo
ubrayan muriel sitsho
Ndicinga ukuba eyona ndlela yokuhenda umfazi kukungqungqa
inkanuko okanye ukubanika umyalezo, ngale ndlela uya kuziva ekhululekile.
Indlela yokwenza uthando kumntu
UVdj Vinnie sitsho
UZamuel Nuñes sitsho
Ndathandana nomfazi otshatileyo kwaye andinakulibala.
Hahaha uyazi? Kulungile ukuba ufunde ezi ntlobo zamanqaku, ukuze wazi ukuba ngabasetyhini abangafanele baphawule phambi "kwabaxhamli. Abasetyhini baxabisekile kwaye bahle ngabantu kwaye AKUKHO Mntu unelungelo lokusisebenzisa njengeziqwenga zenyama. Ukuba amadoda awakhunjulwa, sineemvakalelo. Sukwenza "iinkuni zomthi owileyo" awazi ukuba uza kuyihlawula na ngomnye wabafazi abaphuma kusapho olunye, okanye awuzikhumbuli iintombi zakho, oodade bakho kunye noomama bakho abahluphekayo ? Masibone, ngoku, # umdaniso lo umphezulu kwisikhonkwane kum ».
I-diaz yasendle sitsho
Ndifuna ukulala nomrhwebi wam osisityebi njengoko ndisenza umntu wokundinceda
Phendula kwi-diaz yasendle
Iminyaka emi-4 eyadlulayo ndahamba nomfazi owahlukene, sathandana kodwa yaphela emva kweenyanga ezi-4, emva koko wabuyela emadodeni akhe kwaye sathandana phantse iminyaka emibini ... into endiyifundileyo ayikukuhlukumeza kakhulu, ukubiza kuye xa ekuxelela ukuba ngoku ungamnyanzeli ukuba enze enye into, kwaye umxhase kwinto yonke .. ewe ebengazinzanga esimilweni. Nantoni na endimxelela yona malunga nalo mbandela ibimkhathaza kwaye ndadala iingxaki .. Ingqondi iyanceda kakhulu kwaye izame ukuhambisa ixesha endinokukunika lona kakuhle .. ityala kukuba liphelile kwaye undishiyile xa umfana enesimo esingakumbi kunye nomyeni wakhe naye hahaha kakuhle kubuhlungu kodwa nanamhlanje ungumhlobo wam kwaye ndiyathemba ukuba naye ebhedini kungekudala .. inkcukacha kukuba ikamva elimnandi ndilenza intlekisa ngobomi bam kwiminyaka emi-2 eyadlulayo ndadibana nomnye umfazi otshatileyo, sasingabahlobo nayo yonke into kodwa ukusukela ngoJanuwari ukuya kumhla onguJuni ukuncokola ukuba andisabeki neebhetri kuye ke ngenye imini ndamtsalela umnxeba malunga nomsebenzi wandixelela ukuba umyeni wakhe uzomthengela enye imoto ndamxelela ukuba well serve Kwaye undimemela phaya, wandixelela ukuba ndim ekufuneka ndimmemile, ityala kukuba ngolunye usuku ndithethe naye wandixelela ukuba uyadika emva koko andimbizanga kuba engafuni. Phuma, siphume emva kweentsuku ezimbalwa siphume siye Ku uya kundingxolisa endixelela ukuba kuphela ngabahlobo abakhoyo ukuba umyeni wakhe ebekhona, ngekukho nethuba .. Ndiziphathe kakuhle njengoko sisazi sonke ngokuxhasa , ndincedisa ngokumjonga kancinci yena nabantwana bakhe ngokuphosa izincomo, ndimjongile kwaye ndithethe naye ngendlela ephindwe kabini ndimjongile ndimhlekisa kakhulu, bendicinga ukuba sele ehamba indlela entle kodwa inyani Kukuba ubeke imiqobo ethile kumyeni wakhe esele eyiqondile. Andiyomntu ozokumgweba kodwa ulinxila lokuqala kwaye akanankathalo kuye nakubantwana bakhe, uhlala emenza alile ... inyani kukuba ngoku, kuba eziqhelelanise kancinci, akandibizi okanye Mna kwaye njengoba nje esithi isiqwenga seengcebiso ndimnike uncedo kodwa ndaphinda ndaphinda ndaphinda ndambeka ithambo elincinci ndiyenzile iqhinga lam .. ngelishwa andiziphosanga ukuze ndimange x nhlonipho, ndimxelele ndifuna ukubona wena kwaye undixelele ukuba unditsalele umnxeba .. ngokunyanisekileyo unomdla kakhulu hayi x umzimba wakhe ke ukuba intle ukuba awukho ngaphakathi .. namhlanje ndibanjiwe kwaye andazi ukuba ndenzeni xq inyani ukuba ndinomdla Kwaye ndibanike nengcebiso kuba ndiyathemba ezinye
Khumbula ukuba ungangcungcuthekisi imini yonke ngaphandle kwaxa usazi ukuba umyeni ukhona, ungachukumisi kwimicimbi yomtshato, ungathathi nxaxheba ngaphaya kwale nto uyiyo, ndiyathetha isithandwa, esingasebenziyo, musa ukuba nomona ngendoda kuba oku kuyabacaphukisa, eyokugqibela Gcina ukhumbula ukuba yeyomnye umntu, ayisiyakho, kwaye ayizukufumaneka ...
Abafazi abahle banokoyikisa. Banomtsalane, bayazithemba, kwaye banokufumana nawuphina umntu abafunayo, akunjalo? Ngokuqinisekileyo uya kucinga ukuba awunamtsalane okanye ungazithembi ngokwaneleyo ukuba ungathandana nentombazana enjalo, akunjalo?
Ndingakubonisa ukuba uyaphazama
Ndilele nabafazi abaninzi. Iimodeli, abafazi bezoshishino abaphumeleleyo, kunye namantombazana athile asekholejini.
Ndingumntu oqhelekileyo, nditsho negeek encinci. Kodwa ndiye ndafunda ukubarhwebesha abantu basetyhini abahle kwaye baphumelele ngakumbi kunam. Makhe ndikuxelele iimfihlelo ezikule ncwadi onokuzikhuphela ukuba ufuna ukulala nabafazi abaninzi.
Khuphela apha: http://tinyurl.com/lw49wrv
NDINGAZI UKUBA NDINGU-EDO MEX OWESIFAZANE OSEHLUKILEYO OKANYE UMDALA K NDISUKA KWIMINYAKA EYI-33 UKUYA KWI-37 NDINeminyaka engama-29 I-INVESTORS7787@HOTMAIL.COM NDILINDE UMYALEZO
Ukuba umama wakho uza kumbamba
Alejandro Fernandez sitsho
Molo, ingcebiso elungileyo kakhulu kodwa, kuya kufuneka uthathele ingqalelo xa imeko yomfazi ikwinqanaba elithile lokuzonwabisa kunye neentloni yimeko yakhe yeemvakalelo, kunzima kakhulu ukusondela kwaye ekugqibeleni kuyayiphazamisa impendulo yomyalezo, yalo naluphi na uhlobo ... Logama bengatshatanga, umfazi otshatileyo kufuneka aqhubeke njengoko enjalo, ngaphandle kokuba athathe isigqibo ngenye indlela kwaye ngokuchaseneyo kubandakanya "ikamva okanye ithamsanqa" lesiphelo, akunampilo ukuxoka, ndiyabhala ngesandla esinye kuba umyeni onomona unqumle esinye ... hehehe, kuyadlala, akuyonyani kodwa kuyenzeka kakhulu ke, umfazi ungcono yedwa, ukuba ufuna ukusondela ...
Phendula kuAlejandro Fernández
Le nto ayintombi, kwaye izimvo ngaphezulu ...
Olu hlobo lwenqaku alunangqondo. Kutheni le nto isihogo ndingazixakekisa nomfazi otshatileyo? Kulula kum ukuba ndicinge ukuba into endinokuyenza emfazini wenye indoda iyakwenziwa emfazini wam. Sukwenza into ongafuni yenziwe kuwe. Elula njengaleyo.
Ndineminyaka eli-19 ubudala kwaye ndiyathanda umfazi oneminyaka eyi-45 otshatileyo kwaye ndifuna ukumhlutha ndimthumele kwaye andinakundixelela ukuba ndimenza njani ndimbona yonke imihla kwaye akukho nto ndinokuthetha nayo Ndenza njani
Yonke into inomdla kakhulu, ndingumfazi, babonakala bebahle benomzimba olungileyo, kwaye kwenzeka ntoni kubantu ababhinqileyo, ndibona umntu ondithathela ingqalelo, kwaye andinalo uxolo de sidibane, amatyeli aliqela, oko kukuthi Ndenza izulu ndiye ezantsi esihogweni ngolonwabo olunyulu haho ezingathethekiyo ngothando. Ndide ndibone ixesha elizayo ukuba ndifuna ukuyenza, ndiye ndidikwe, kwaye ndilahlekelwe ngumdla, ndiyeke. Kwaye ndiya kulandelayo ndinayo engqondweni. Ngowuphi kubo wonke umntu onesibindi, ozibiza ngokuba ungoyisi, onobuganga bokundenza ndithandane.
Oko kubuhlungu njengoko uninzi lwabantu lucinga. Ukuba nobudlelwane nomntu obhinqileyo otshatileyo UKUKHANYA. Esinye sezona zono zimbi emehlweni kaThixo kwaye sineziphumo ezibi. Phakathi kwezinye izinto, ubudlelwane busakhiwa kwintlungu yomntu, butsala ubuhlwempu, buvelisa inzondo kunye neengxabano kwiintsapho, kwizigulo nakwiziqalekiso ebantwaneni nakwizukulwana. Kwaye ukufa okona kubi phakathi kwabakrexezi, njengoko isitsho iBhayibhile.
Molweni nonke, ndiyathemba ukuba umntu uza kuyiphendula le nto kuba iyandicenga ... ndiyamthanda umazala wam kwaye ndifuna ukulala naye amaxesha amaninzi kangangoko sifuna ... uneminyaka engama-37 kwaye mna ndina-19 kwaye Isimilo esomeleleyo ngaphandle kokuba uxelela phantse yonke into kwiqabane lakhe ... ukusuka kwinto endixelelwa yintombazana yam kulula kodwa inyani kukuba ndiyayibona inzima ... ndingathanda ukuba umntu andincede ndizalisekise umbono wam ngengcebiso ezithile ndiyathemba ukuba umntu uza kundiphendula ngokukhawuleza
I-PS ndiyakrokrela ukuba ndiyamtsala kuba uyandibona kakhulu kwaye xa ndingenayo ihempe, undibona ngobunono kakhulu UNCEDO NCEDA !!!!!
Inyani yile yokuba zonke ezi zibhanxa ziphawula ngokufuna ukoyisa umfazi otshatileyo ofunga phambi koThixo ukuba atyhubele ebunzimeni nasekubhityezelweni ade afe kubohlula kuthando lobomi bakhe, kwiminyaka eli-15 ubudala ndizibona ndikhulile ukuba zonke ezi zinto Wonakele ngeengcinga ezingahambelaniyo kunye nezobudenge ngokufuna ukutshabalalisa usapho lwabasetyhini esele luyile usapho, kwaye luyinxalenye yentsika exhasa uthando phakathi kwakhe nabantu abathandayo.
Lara luiz sitsho
Imibuliso, ndinguLara Luiz waseBrazil kodwa ndizinze eCarlifonia (e-USA) Ndonwabile namhlanje kuba ndikwazile
Kudala ndifuna. Ndidibane noDR.Zubia otshintshe ifomu yam yanamhlanje. Ndifuna
Yithi enkosi kakhulu kuye, ndifuna ukukwazisa ukuba angenza okufanayo nakuwe. Kwaye ndinayo
Ukwazi emva kokuthatha imifuno yakho yendalo ngaphandle kweziphumo ebezona zilungileyo
I-Herbalist endikhe ndadibana nayo ebomini bam. Ukuqala kwam ukubona ukuba andizange ndikholelwe ukuba iyinyani kude kube
Ndiqala ukubona utshintsho emzimbeni wam, ndithi enkosi kuye naphina apho akhoyo.
Nxibelelana naye zubiazabiadum@yahoo.com Ndiyazi ukuba iyakwandisa iimpundu nesifuba
Ndiyakholelwa ukuba abo bacaphukisa umfazi otshatileyo ngabona bantu babi kakhulu ekutshabalaliseni ubudlelwane.
Ndiziva ndinomtsalane omkhulu kunye nomhlobo otshatileyo kadadewethu, ndicinga ukuba umtsalane uyaphindeka kuba ngamanye amaxesha sijongana emehlweni kwaye siyancuma okanye xa sisithi sawubona okanye sithi ndlela-ntle, ukuba ayinguye, ndim enye ingalo. Andazi ukuba iyakuba zizimvo zam na ukuba kubekho into kwaye andazi ukuba ndingaqhubela phambili njani
Ndizama ukunxibelelana nodadobawo, ubonakalisa isimilo kum, ndiyiphinda kabini iminyaka yentombi yakhe, kwaye ndimthumelele umyalezo, kwaye undixelela ukuba ndihlale ndiyimfihlo phakathi kwethu ndimthumelele umyalezo xa ndindedwa
Faka umbala obomvu kwinkangeleko yakho kule Krisimesi ngezi zimvo